အပြိုစငျမသေူ – My Blog
အောငျကိုနိုငျနှငျ့ဒျေါခငျခငျသူတို့၏ ဝတျလဈစလဈ ခန်ဒာကိုယျနှဈခုသညျ သိမျ့သိမျ့တုနျ၍သှား၏။သူတို့ နှဈဦးသညျ တယောကျကိုတယောကျ သိမျးကွုံးကာ တငျးကွပျစှာဖွငျ့ ဖကျထားကွ၏။ ခဏမြှအကွာတှငျတော့ သူတို့၏ ကိုယျနှဈခုသညျ တဖွေးဖွေးငွိမျကသြှားရတော့သညျ။ အောငျကိုနိုငျ၏ဦးခေါငျးသညျ မကျြလုံးနှဈလုံးပိတျ၍ ပကျလကျလေး မှိနျးနသေော ဒျေါခငျခငျသူ၏ ဦးခေါငျးပျေါတှငျ မှောကျလြှကျသားဖွဈကာ ပါးခငျြးအပျလြှကျရှိ၏။ (၅)မိနဈမြှ ကွာသှားသောအခါတှငျ အောငျကိုနိုငျ၏ကြောပွငျကို ဖကျထားသော ဒျေါခငျခငျသူ၏လကျနှဈဖကျမှာ ဖွေးဖွေးခငျြး လှုပျရှားလာလြှကျ အောငျကိုနိုငျ၏ ကြောပွငျကယျြကွီးကို သူမ၏လကျဖဝါးလေးဖွငျ့ ပှတျသပျ၍ပေးလာ၏။
ပွီးတော့ သူမနှငျ့ ပါးခငျြးကပျလြှကျ မှောကျလကျြသားလေးရှိနသေော အောငျကိုနိုငျ၏မကျြနှာဘကျသို့ ဒျေါခငျခငျသူသညျ သူမ၏ပကျလကျလှနျ၍ထားသော မကျြနှာလေးကို လှညျ့ကာ အောငျကိုနိုငျ၏ ပါးပွငျသို့ သူမ၏နှာသီးဖြားလေး ဖိသှငျးလြှကျ ရှိုကျကာရှိုကျကာဖွငျ့ အားပါးတရနမျးလိုကျလသေညျ။ထိုအခါတှငျတော့ သူမ၏မကျြနှာလေးဘေးမှ မှောကျလကျြသားရှိနသေော အောငျကိုနိုငျ၏ဦးခေါငျးသညျခေါငျးထောငျ၍ ထာလာလသေညျ။ အောငျကိုနိုငျသညျ သူ၏ဦးခေါငျးကိုထောငျလိုကျပွီးသညျနှငျ့ ပကျလကျလေးပွနျဖွဈ၍သှားသော ဒျေါခငျခငျသူ၏ မကျြနှာလေးကို ကွညျကွညျနူးနူးဖွငျ့ တစိမျ့စိမျ့ကွညျ့နလေိုကျသညျ။ပွီးတော့ သူမ၏မကျြနှာလေးအနှံ့ကို သူ၏နှာခေါငျးဖွငျ့ တဈခကျြခငျြးနမျး၍နေ၏။ဒျေါခငျခငျသူကလညျး သူမ၏မကျြလုံးလေးနှဈဖကျကို မှေးမှိတျလကျြ ကနြေပျပွုံးလေးပွုံးယောငျသမျးကာ သူမ၏မကျြနှာလေးကို မော့မော့လေးပေးကာ အနမျးခံ၍နသေညျ။
ဒျေါခငျခငျသူ၏မကျြနှာလေးအနှံ့ကို အားရအောငျနမျးပွီးသညျနှငျ့ အောငျကိုနိုငျသညျ ဖူးဖူးလုံး၍ထနသေော သူမ၏နှုတျခမျးလေးကို သူ၏နှုတျခမျးနှဈလှာဖွငျ့ ငုံ၍စုပျယူကာ နမျးလိုကျတော့………. ဒျေါခငျခငျသူကလညျး အောငျကိုနိုငျ၏ နှုတျခမျးမြားကို ပွနျလညျတုံ့ပွနျကာ နမျးပေးသညျ။ပွီးတော့ သူမ၏လြှာဖြားလေးဖွငျ့ အောငျကိုနိုငျ၏နှုတျခမျးလေးမြားကို ပှတျသပျ၍ပေးသညျ။ အောငျကိုနိုငျ၏ လီးကွီးကတော့ ဒျေါခငျခငျသူ၏စောကျပတျထဲတှငျသာ တဆုံးသှငျး၍ ထားလြှကျပငျရှိသေး၏။ သူမ၏စောကျပတျထဲရှိ အောငျကိုနိုငျ၏ လီးကွီးမှာ တဈခြီပွီးသှားခဲ့သျောလညျး လုံးဝ လုံးဝပငျကြ၍မသှားဘဲ လီးကွီးမှာ ပို၍ပငျ ကွီးမားသနျမာလာသညျဟု ထငျရ၏။
သံခြောငျးကွီးသဖှယျ မာ၍တောငျနသေဖွငျ့ ဒျေါခငျခငျသူမှာ ကွိတျ၍ကွနေပျနမေိတော့လသေညျ။ အောငျကိုနိုငျသညျ သူ၏လီးတနျကွီးကို ဒျေါခငျခငျသူ၏စောကျပတျကွီးအတှငျးမှ မခြှတျရသေးသညျ့အတှကျ သူ၏ကိုယျလုံးသညျ ဒျေါခငျခငျသူ၏ထောငျ၍ထားသော ပေါငျနှဈလုံးကွားတှငျ ရှိ၍နသေေး၏။ သူတို့နှဈဦးသညျ တဈဦးနှငျ့တဈဦး ဖကျလြှကျနှုတျခမျးခငျြးမြားတလြေှ့ကျ စုပျ၍နမျးနကွေစဉျမှာပငျ ဒျေါခငျခငျသူ၏ပေါငျတံကွီးမြားသညျ သူမ၏ပေါငျနှဈလုံးကွားတှငျ ရှိနသေေးသော အောငျကိုနိုငျ၏ ဝတျလဈစလဈကိုယျလုံးကို သူမ၏ဝတျလဈစလဈ ပေါငျသားနုနုလေးမြားဖွငျ့ ပှတျသပျ၍ပေးလာ၏။ အတနျငယျမြှ ကွာသှားပွီးသောအခါတှငျ အောငျကိုနိုငျသညျ ဒျေါခငျခငျသူ၏နှုတျခမျးသားမြားဆီမှ သူ၏နှုတျခမျးမြားကို ဆှဲ၍ဖွုတျလိုကျကာ သူမ၏ဦးခေါငျးကိုထောငျ၍ ထလိုကျပွီး လကျနှဈဖကျကို သူမ၏ကိုယျလုံးဘေးနှဈဖကျတှငျ တဈဖကျတဈခကျြစီ ထောကျ၍ဆနျ့တနျးလိုကျလသေညျ။
ပွီးသညျနှငျ့ ဒျေါခငျခငျသူ၏စောကျပတျထဲမှ သူ၏လီးကွီးကို ဆှဲ၍ဖွေးဖွေးခငျြး ထုတျလိုကျသဖွငျ့ ဒျေါခငျခငျသူသညျ အောငျကိုနိုငျ၏ခါးကို သူမ၏လကျနှဈဖကျဖွငျ့ လှမျး၍ကိုငျလိုကျပွီး သူမ၏ကိုယျပျေါသို့ပွနျခပြွီးသညျနညျးတူ သူမ၏ဖွူဖွူဖှေးဖှေး ဖငျသားကွီးမြားကိုလညျး မွောကျကွှ၍ သူမ၏ စောကျပတျကွီးကို ကော့၍ ကေ့ာ၍ပေးလိုကျသညျ။ ထိုအခါတှငျ သဘောပေါကျနားလညျလှယျသော အောငျကိုနိုငျက ထိပျဖူးနားအထိ ဆှဲထုတျထားပွီးသောသူ၏လီးကွီးကို ဒျေါခငျခငျသူ၏ စောကျပတျကွီးထဲသို့ ခပျဆတျဆတျပငျပွနျ၍ ထိုးသှငျးလိုကျပွီး သညျနှငျ့ ခပျသှကျသှကျပငျဆောငျ့၍ ဖိကာဖိကာ လိုးတော့သညျ။တဈခြီပွီးသှားခဲ့သော အရညျမြားမှာ သနျ့စငျရခွငျးမရှိသေးသညျ့အတှကျ ဒျေါခငျခငျသူ၏စောကျပတျထဲတှငျ ပွညျ့လြှံ၍နသေညျ။
အောငျကိုနိုငျ၏လီးကွီးမှာ ဒျေါခငျခငျသူ၏ စောကျပတျထဲသို့ ဆောငျ့၍သှငျးလိုကျတိုငျး သူမ၏စောကျပတျထဲမှ အရညျမြားသညျ အနျ၍ထှကျလာသကဲ့သို့ အောငျကိုနိုငျ၏လီးကွီးသညျ သူမ၏စောကျပတျကွီး ထဲမှ ဆှဲထုတျလိုကျသောအခါတှငျလညျး စောကျပတျအတှငျးမှ အရညျမြားသညျ လီးကွီးနှငျ့အတူ ကပျညှိ၍ပါလာကာ အပွငျဖကျသို့ ပှကျကနဲ ပှကျကနဲ ထှကျ၍ကလြာတော့၏။ အခကျြ(၃၀)မြှဆောငျ့၍ လိုးပွီးသောအခါတှငျ နောကျထပျဆောငျ့၍လိုးရနျ အောငျကိုနိုငျသညျ သူ၏လီးကွီးကို ဒျေါခငျခငျသူ၏စောကျပတျထဲမှ ဆှဲထုတျလိုကျခြိနျတှငျ ဒျေါခငျခငျသူသညျ ရုတျတရကျကှေး၍ ထောငျထားသော သူမ၏ပေါငျနှဈဖကျကို အမွနျပငျဆနျ့၍ခွထေောကျနှဈဖကျကို စငျးလိုကျပွီးသညျနှငျ့ သူမ၏ကိုယျလုံးလေးကို စောငျးကာဘေးသို့ လှိမျ့ထှကျလိုကျသဖွငျ့ သူမ၏စောကျပတျအတှငျးမှ အောငျကိုနိုငျ၏ လီးကွီးမှာ ကြှတျ၍ထှကျသှားရတော့၏။
ဒျေါခငျခငျသူသညျ ကုတငျပျေါတှငျ ထ၍ထိုငျလိုကျပွီး ကုတငျဘေးကွမျးပွငျတှငျ ကှငျးလုံးကြှတျ၍ခထြားသော အောငျကိုနိုငျ၏ပုဆိုးကို ငုံ့၍ကောကျလိုကျ၏။ပွီးတော့ သူမ၏ဘေးတှငျ ဒူးထောကျရပျသားဖွဈ၍နသေော အောငျကိုနိုငျဖကျသို့ လှညျ့လိုကျလေ၏။ အောငျကိုနိုငျ၏ လီးကွီးမှာ အရညျမြားပပှေလကျြပွောငျ၍တငျးနကော အသဲယားဖှယျကောငျးလှ၏။ဒျေါခငျခငျသူသညျ အောကျကိုနိုငျ၏လီးကွီးကို တဈခကျြမြှတှကော ကွညျ့လိုကျပွီးမှ သူမ၏လကျအတှငျးမှ ပုဆိုးဖွငျ့ အောငျကိုနိုငျ၏လီးတနျကွီးကို သုတျကာသနျ့စငျပေးသညျ။ပွီးတော့ အောငျကိုနိုငျ၏ လမှေးအုံနှငျ့ ပေါငျခွံမြားကို ပုဆိုးဖွငျ့ သုတျလြှကျ စိတျတိုငျးကြ သနျ့စငျပေးရ၏။ ဒျေါခငျခငျသူသညျ အသကျ(၃၆)နှဈရှိပွီး သူမ၏အရပျမှာ (၅)ပေ(၇)လကျမလောကျရှိ၏။
သူမ၏ ကိုယျလုံးအခြိုးအစားမှာ လုံးကွီးပေါကျလှဖွဈပွီး အသားအရညျမှာ ဖွူဝငျး၍နသေညျ။ ဒျေါခငျခငျသူသညျ အသကျ(၁၈)နှဈရှိ ဒုတိယနှဈ ကြောငျးသူ မသေူဟနျ မိခငျဖွဈပွီး သူမ၏ ခငျပှနျး ဦးကြျောသီဟသညျ လှနျခဲ့သော (၅)နှဈခနျ့ကပငျ ဆုံးပါးသှားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ခငျပှနျးသညျ မရှိသညျ့နောကျတှငျ ဒျေါခငျခငျသူသညျ Company လုပျငနျးမြားကို သူမကိုယျတိုငျ ဦးစီး၍ဆောငျရှကျခဲ့သညျ။လုပျငနျးမြားသညျ သူမ၏လကျထကျတှငျပို၍ အောငျမွငျကာ တိုးတကျလာခဲ့သညျ။ Company မှနယျတှငျ ဆောငျရှကျ၍နသေညျ့ လုပျငနျးခှငျသို့ ဒျေါခငျခငျသူသညျ သှားရောကျခဲ့ရငျး နယျရှိလုပျငနျးခှငျတှငျ အလုပျလုပျလြှကျရှိသော အောငျကိုနိုငျကိုတှခေဲ့ရလသေညျ။ အောငျကိုနိုငျ၏လုပျရညျကိုငျရညျမြားကွောငျ့ နယျရှိလုပျငနျးမြားကို ကွီးကွပျနသေူမြားကလညျး သူ့ကိုသဘာကြ၏။ဒျေါခငျခငျသူကလညျး အောငျကိုနိုငျကို မွငျမွငျခငျြးပငျ ခငျမငျမိ၍ ရနျကုနျရှိ company ရုံးခြုပျတှငျ တာဝနျပေးရနျ ချေါဆောငျလာသညျ။
အောငျကိုနိုငျ ရနျကုနျသို့ရောကျပွီးသောအခါတှငျ သူမ၏နအေိမျတှငျ လာရောကျနထေိုငျစပွေီး ကှနျပြူတာသငျတနျးနှငျ့ စာရငျးကိုငျသငျတနျးတို့ကို (၁၀)တနျးအောငျမွငျပွီးဖွဈသော အောငျကိုနိုငျကို တကျရောကျစခေဲ့သညျ။ ဒျေါခငျခငျသူသညျ အောငျကိုနိုငျ၏နရေေးစားရျေါအားလုံးကို လိုအပျသညျထကျပို၍ပငျ ပေးကမျးကြှေးမှေး ထောကျပံ့၍ ထားခဲ့သညျ။ သဒ်ါဒလှနျတော့ တဏှာကြှနျဖွဈ ဆိုတာမြိုးလို ယောကျြားနှငျ့ (၅)နှဈကြျော ကငျးကှာနခေဲ့ရသော ဒျေါခငျခငျသူသညျ သူမနှငျ့ လကျပှနျးတနီးနထေိုငျခဲ့သညျ့ အောငျကိုနိုငျ၏အပျေါတှငျ တိမျးညှတျ၍ လာခဲ့ရသညျ။ အောငျကိုနိုငျက သူမအပျေါတှငျစိတျဝငျစားလာအောငျ အမြိုးမြိုးသော သိမျမှသေ့ော နညျးလမျးမြားဖွငျ့ စှမျးဆောငျခဲ့ရာတှငျ အသကျ(၂၃)နှဈသာရှိပွီး မိနျးမမြားနှငျ့ ရောရောထှေးထှေး မနခေဲ့ဘူးသညျ့ အောငျကိုနိုငျသညျ သူမ၏ကှနျယကျအတှငျးမလှုပျနိုငျအောငျ ဖွဈခဲ့ရလသေညျ။
အောငျကိုနိုငျသညျ အရပျ(၅)ပေ (၈)လကျမ လောကျရှိပွီး သူ၏ကိုယျလုံးမှာ အရပျနှငျ့လြှျောညီစှာတောငျ့တငျးသနျစှမျး၏။ယောကျြားပီသသော ရုပျရညျရှိပွီး ခငျမငျစရာကောငျးလှ၏။ ဒျေါခငျခငျသူလညျး ကလေးတဈယောကျ မှေးဖူးသော အသကျ(၃၆)နှဈရှိသူတဈဦးဖွဈသျောလညျး ကောငျးကောငျးနေ ကောငျးကောငျးစားပွီး နစေ့ဉျပငျ မအားလပျသညျ့ကွားမှ မှနျမှနျပငျ လကေ့ငျြ့ခနျး ယူခဲ့သူတဈဦးဖွဈ၍ မသိသူမြားက ဒျေါခငျခငျသူကို အသကျ(၃၀)လောကျပငျ ရှိမညျဟု ခနျ့မှနျးကွသညျ။ဒျေါခငျခငျသူသညျ သူ၏သမီးဖွဈသူ မသေူဟနျနှငျ့အတူ ယှဉျတှဲ၍ပါလာပါက သူမတို့နှဈယောကျကို ညီအဈမဟုပငျ ထငျမှတျရလအေောငျ ဒျေါခငျခငျသူသညျ နုပြိုလှသညျ။ အောငျကိုနိုငျ၏လီးကွီးကို ဒျေါခငျခငျသူသညျ သနျ့စငျသှားပွီးသောအခါတှငျ သခြောစှာကိုငျ၍ ကွညျ့လိုကျလသေညျ။အောငျကိုနိုငျ၏လီးကွီးသညျ အရှညျ(၇)လကျမနှငျ့လုံးပတျမှာ ကပျြလုံးသာသာခနျ့ ရှိလသေညျ။
ညိုမဲ၍နသေော လီးတနျကွီးပတျလညျတှငျ အကွောမြားဖုထဈ၍ အပွိုငျးပွိုငျးထနသေညျ။ လီးတနျကွီးထိပျတှငျ ထိပျဖူးလေးမှာလညျး အဖြားလေးပျေါရုံလောကျသာ ပွဲလြှရှိသညျ။ လီးတနျကွီး၏အရငျးတှငျ အမှေးနကျနကျလေးမြားမှာ ခပျစိတျစိတျလေး ပေါကျလြှကျရှိသညျ။ လီးတနျကွီး၏အောကျဖကျတှငျတော့ ဂှေးဥကွီးမြားမှာ လုံးတဈ၍မဲတာနသေညျ။ သူ၏လီးကွီးကို သခြောစှာဂရုစိုကျ၍ကွညျ့နသေော ဒျေါခငျခငျသူသညျ သူမ၏ခွောကျသှေ့၍လာသော နှုတျခမျးလေးမြားကို သူမ၏လြှာဖြားလေးကိုထုတျ၍ တဈခကျြနှဈခကျြပှတျလိုကျသညျ။ ပွီးသညျနှငျ့ လကျတဖကျဖွငျ့ အောငျကိုနိုငျ၏လီးတနျကွီးကို ဆှဲကိုငျကာ ဆုတျနယျဖွဈညှဈပေး၏။ ပုဆိုးလေးဖွငျ့ သူမ၏စောကျပတျနှငျ့ ပေါငျခွံမြားကို သုတျကာသနျ့စငျပေးနေ၏။
သူမ၏ စောကျပတျအုံတဈခုလုံးနှငျ့ ပေါငျခွံနှဈဖကျတို့တဈဝိုကျတှငျ အရညျမြား သနျ့စငျသှားပွီဆိုသော အခါတှငျမှ သူမသညျ လကျအတှငျးမှပုဆိုးကို ကုတငျခွရေငျးဘကျတှငျ ထားလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ အောငျကိုနိုငျ၏ဂှေးဥကွီးကို သူမလကျဖဝါးအတှငျးထညျ့၍ ဖှဖှလေးဆုတျနယျပေး၍ နသေညျ။ ကနျြလကျတဖကျကလညျး အောငျကိုနိုငျ၏လီးတနျကွီးကို ကိုငျလြှကျ ပှတျ၍နေ၏။ ခဏမြှအကွာတှငျ ဒျေါခငျခငျသူသညျ အောငျကိုနိုငျ၏ လီးတနျကွီးဆီသို့ သူမ၏ မကျြနှာကိုအပျကာ သူမ၏နှုတျခမျးလေးမြားဖွငျ့ တဆတျဆတျဖွဈ၍နသေော လီးတနျကွီး၏ထိပျဖူးကွီးကို ဖိကပျ၍ တဈခကျြနမျးလိုကျသညျ။လီးတနျကွီးကို ဆုတျကိုငျထားသော သူမ၏လကျကလညျး အောငျကိုနိုငျ၏လီးတနျကွီးကို အားပါးတရ တဈခကျြမြှဖိကာ ဖဈြညှဈပွီး ဒျေါခငျခငျသူသညျ သူမ၏ ဝတျလဈစလဈကိုယျလုံးကို နောကျသိုလှညျ့ကာ အောငျကိုနိုငျအား ကြောခိုငျးလြှကျ ဒူးထောကျထိုငျလိုကျသညျ။ပွီးတော့ သူမ၏လကျနှဈဖကျကို ရှသေို့ဆနျ့တနျးကာ သူမ၏ဖငျသားကွီးမြားကို မွောကျကွှလကျြ ခါးကိုညှတျပွီး ဆနျ့တနျးထားသော သူမ၏လကျနှဈဖကျကို အိပျယာပျေါသို့ ထောငျလိုကျကာ အောငျကိုနိုငျ၏ ရှနေ့ားတှငျ ဖငျကုနျးပေးလိုကျတော့သညျ။
နဂိုကထဲမှ လုံးတဈကားစှငျ့၍နသေော သူမ၏ဖငျသားကွီးမြားမှာ ကုနျးလိုကျသဖွငျ့ ပို၍ကားစှငျ့သှားကာ ဖငျသားကွီးမြားမှာ ဖွူဖွူဖှေးဖှေးဖွငျ့ အားရစရာကောငျးလှ၏။ ဖွူဖွူဖှေးဖှေး ဖငျသားကွီးနှဈခု၏ အလယျတညျ့တညျ့အောကျတှငျတော့ ဒျေါခငျခငျသူ စောကျပတျကွီး၏နှုတျခမျးသားနှဈခုမှာ လကျတလုံးသာသာ လကျနှဈလုံးနီးပါးမြှ ညိုမဲကာ နောကျသိုပ ထှကျ၍နသေညျ။သူမ၏ စောကျမှေးတှနျ့လိမျလိမျ သုံးလေးပငျသညျလညျး မဲနကျကောကျကှေးလြှကျ နောကျဖကျသို့ထှကျ၍နသေညျ။ အောငျကိုနိုငျသညျ ဒျေါခငျခငျသူ၏ဖငျကွီးနားသို့တိုးကပျသှားပွီး သူမ၏ဖွူဖွူဖှေးဖှေး ဖငျသားကွီးနှဈခုကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ဖဈြညှဈဆုပျနယျ၏။ပွီးတော့ သူ၏မကျြနှာကို ဖငျသားဖွူဖွူဖှေးဖှေးကွီးမြား တှငျ အပျကာသူ၏နှာခေါငျးဖွငျ့ ဖငျသားကွီးမြားကို ဖိကာဖိကာဖွငျ့ မကျမောစှာနမျးလိုကျလသေညျ။
ပွီးသညျနှငျ့ အောငျကိုနိုငျသညျ ဒူးထောကျလိုကျပွီးလကျတဈဖကျဖွငျ့ သူ၏လီးတနျကွီးကို ကိုငျကာ ဒျေါခငျခငျသူ၏နောကျဘကျတှငျ စူ၍ထှကျနသေော စောကျပတျကွီး၏နှုတျခမျးသား နှဈခုကွားသို့ လီးတနျကွီးထိပျဖြားကို လကျတဆဈမြှဝငျအောငျ ဖိသှငျးလိုကျ၏။ပွီးသညျနှငျ့ သူ၏လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ဒျေါခငျခငျသူ၏ခါးလေးကို ဆှဲ၍ကိုငျကာ လီးကွီးကိုဖိ၍ သူမ၏စောကျပတျကွီးထဲသို့ ဆောငျ့၍သှငျးလိုကျတော့သညျ။ “…ဗွီ…..ဗွီ…..ဗွိ….ဖှတျ…..” “အ….အငျ…..အား…..အ……ကြှတျ……ကြှတျ…..” ဒျေါခငျခငျသူ၏ခေါငျးမှာနောကျသို့ လနျသှားပွီး သူမ၏မကျြတောငျမြားမှာ စငျး၍ကသြှားတော့၏။အောငျကိုနိုငျကတော့ စောကျပတျကွီးထဲသို့ သူ၏လီးကွီးတဆုံးဝငျသှားသညျနှငျ့ ခကျြခငျြးဆိုသလိုပငျ ခပျသှကျသှကျပငျ ပွနျ၍ဆှဲထုတျကာ တဈခါပွနျ၍ဆှဲထုတျကာ တဈခါပွနျ၍ ဆောငျ့သှငျးလိုကျရငျး အားမနာတမျး ဆောငျ့၍ ဆောငျ့၍ လိုးတော့လသေညျ။
အောငျကိုနိုငျသညျ နောကျမှဆောငျ့၍လိုးလိုကျတိုငျး ဒျေါခငျခငျသူ၏ကွီးမားလုံးတဈ၍နသေော ဖငျသားကွီးမြားမှာ တုနျကနဲ တုနျကနဲ ဖွဈ၍သှားရသညျ။ထို့ပွငျ သူမ၏ဦးခေါငျးလေးမှာလညျး နောကျသို့လနျ၍ လနျ၍ သှားရသညျ။ အောငျကိုနိုငျ၏ဆောငျ့ခကျြမြားသညျ လေးဘကျထောကျကာ ဖငျကုနျး၍အလိုးခံနသေော ဒျေါခငျခငျသူ၏ ကိုယျလုံးကို တုနျ၍တုနျ၍သှားစခေဲ့ပွီး သူမ၏အောကျတှငျတှဲလောငျးဖွဈနသေညျ့ နို့ကွီးမြားမှာ ခါရမျး၍နတေော့၏။ ဒျေါခငျခငျသူသညျ သူမ၏နောကျမှနေ၍လိုးပေးနသေော အောငျကိုနိုငျ၏ဆောငျ့ခကျြမြားအတိုငျး သူမ၏ ဖွူဖွူဖှေးဖှေးဖငျသားကွီးမြားကို နောကျပွနျကော့၍ကော့၍ ပေးကာ အားပါးတရ အလိုးခံနတေော့သညျ။
“….ဖှတျ….ပလှတျ…..” “……အ……မောငျ…..မောငျလေး…….လီး ….လီးကို အပျေါကို ကျောပွီး ဆောငျ့စမျးပါ…..အ….” အလိုးမကြှမျးကငျြသေးသော အောငျကိုနိုငျကို ဒျေါခငျခငျသူက သူမ၏စောကျပတျအတှငျးသားမြားနှငျ့ လီးကွီးကို ထိထိမိမိဖွဈစရေနျ သငျပွပေးရငျး အလိုးခံနေ၏။မမ……ကောငျးလားဟငျ……အ…..အား……ကောငျး…..ကောငျး..တယျ……အငျ့…”အငျ့……….လီးကို အောကျကို စိုကျဆောငျ့ပေးပါ……အငျ့……အ …” ဒျေါခငျခငျသူသညျ သူမ၏ဖငျကွီးမြားကို နောကျပွနျကော့ပေး၍ အောငျကိုနိုငျကို အမြိုးမြိုး လိုးခိုငျးနသေညျ့အပွငျ တဈခကျြ တဈခကျြမှာလညျး သူမ၏ဖငျကွီးကို လှုပျရှား၍ စကောဝိုငျးလေးလုပျပေး နသေေး၏။သူမပွောသလိုပငျ အောငျကိုနိုငျကလညျး လိုးပေးနသေဖွငျ့ ထိထိမိမိဖွဈကာ နှဈယောကျစလုံး အရသာတှနေ့ကွေ၏။ အောငျကိုနိုငျသညျ ဒျေါခငျခငျသူ၏ နောကျမှဆောငျ့၍လိုးနရေငျး သူမ၏လုံးတဈဖွူဖှေး၍နသေော ဖငျသားကွီးမြားကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ အားမလိုအားမရ ဆုတျနယျကာ ပေးလိုကျသေး၏။ အကငျးပါးသော အောငျကိုနိုငျသညျ သူ၏လီးကွီးကို ဒျေါခငျခငျသူ၏စောကျပတျထဲသို့ တညျ့တညျ့လိုးလိုကျ၊ အပျေါသို့လီးကို ကျော၍လိုးလိုကျ၊အောကျသို့စိုကျကာ ဖိဆောငျ့၍ လိုးလိုကျဖွငျ့ အားမာနျနှငျ့ ပွဈလိုးဆောငျ့၍နသေညျ။
အောငျကိုနိုငျ၏တတျကြှမျးလာသော လိုးဆောငျ့ခကျြမြားကွောငျ့ ဒျေါခငျခငျသူ၏ စောကျပတျထဲတှငျ အရသာမြား ကောငျးသထကျ ကောငျးလာပွီးဖွဈသဖွငျ့ သူမ၏ ဆနျ့တနျးထားသော လကျနှဈဖကျကို တဈတောငျဆဈမှနေ၍ ကှေး၍ခကြာ တံတောငျဆဈနှဈဖကျကို အားပွု၍ ထောကျထားလိုကျတော့သညျ။ ဒျေါခငျခငျသူသညျ သူမ၏ကိုယျအရှပေို့ငျးကို နိမျ့ခြ၍ တံတောငျဆဈကို ထောကျကာအာွး့ပုလိုကျသဖွငျ့ သူမ၏ဖငျသားကွီးမြားကို ပို၍အယျကာ လုံးတဈ၍လာခဲ့ရပွီး သူမသညျ ဖငျဗူးထောငျး ထောငျပေးသကဲ့သို့ ဖွဈကာ သူမ၏စောကျပတျကွီးမှာလညျး ကော့၍တကျလာတော့၏။ ဒျေါခငျခငျသူ၏ ကော့၍တကျလာသော စောကျပတျကွီးနှငျ့အတူ ကုနျး၍ထားသဖွငျ့ စောကျပတျကွီးထိပျမှ စောကျစလေ့ေးသညျလညျး တဈပါတညျးနောကျသို့ထှကျကာ မော့၍ကော့တကျလာသော စောကျပတျထဲသို့ ဆောငျ့၍လိုးနသေော အောငျကိုနိုငျ၏လီးကွီးသညျ အောကျဖကျနှငျ့ တဈခကျြတဈခကျြဖိ၍ ပှတျ၍ပှတျ၍ သှားခဲ့ရသဖွငျ့ ဒျေါခငျခငျသူမှာ အရသာမြားရှိလှနျးမက ရှိလာ၍ သူမ၏အောကျ နှုတျခမျးလေးကိုပငျ အားတငျးကာ ကိုကျထားရသညျအထိဖွဈရသညျ။
“……ဖှတျ……ဗွှတျ……ဗွှတျ……” အောငျကိုနိုငျမှာလညျး ဒျေါခငျခငျသူ၏ရကျရောစှာအပေးကောငျးမှုကွောငျ့ သူ၏လီးကွီးမှာ ထိထိမိမိဖွငျ့ ရှိလာကာ အရသာမြားရှိသထကျရှိလာပွီဖွဈ၍ အောငျကိုနိုငျသညျ ဒျေါခငျခငျသူ၏ ခါးကိုလကျနှဈဖကျဖွငျ့ ဆှဲကိုငျကာ အားကုနျထုတျ၍ ခပျကွမျးကွမျးပငျ လိုး၍နတေော့သညျ။ .အငျး……ဟငျး……ကြှတျ……ကောငျးလိုကျတာနျော……ဆောငျ့…..ဆောငျ့…..အ…….မောငျ…..မောငျလေး…..မ..မ….ပွီးခငျြလာပွီ……အ……အား….အ ……ဆောငျ့ပေးပါ…..အငျး…..ဆောငျ့ပေးမယျ…မ…..မ……အား…” ဒျေါခငျခငျသူ၏ ဝတျလဈစလဈကိုယျလုံးမှာ တသိမျ့သိမျ့တုနျ၍သှားပွီး သူမ၏ဖငျသားကွီးမြားမှာလညျး နောကျသို့ ကော့ကနဲ ကော့ကနဲ ဖွဈ၍သှားသညျ။အောငျကိုနိုငျမှာလညျး သူ၏ကိုယျလုံးမှာ ဆတျကနဲ ဆတျကနဲ တှနျ့၍သှားတော့၏။
ပွီးသညျနှငျ့ ဒျေါခငျခငျသူသညျ ကုတငျပျေါရှိ အိပျယာပျေါသို့ မှောကျကသြှားရသကဲ့သို့ အောငျကိုနိုငျသညျလညျး ဒျေါခငျခငျသူ၏ကိုယျလုံးကိုလှမျး၍ ဖကျလိုကျရငျး ဒျေါခငျခငျသူနှငျ့အတူ သူမ၏ကြောမှာကပျလကျြသားပငျ မှောကျရကျသားလေးလိုကျပါကာ ကသြှားရတော့၏။ ဒီတဈညတော့ ဒျေါခငျခငျသူသညျ အောငျကိုနိုငျ၏ကုတငျတှငျပငျ အိပျဖွဈခဲ့၏။နောကျညမြားတှငျတော့ အောငျကိုနိုငျကို သူမ၏အခနျးသို့ ချေါ၍အိပျစကျခဲ့၏။ သူတို့နှဈယောကျမှာ ဒျေါခငျခငျသူ၏သမီးဖွဈသူ မသေူဟနျမသိအောငျ အတနျတနျသတိထား၍နခေဲ့ကွရ၏။မသေူဟနျကလညျး အောငျကိုနိုငျကို ကွညျ့၍မရ။ အကွောငျးကတော့ မသေူဟနျသညျ သူမလိုလှပသော သူကို အောငျကိုနိုငျက ဒီအိမျစရောကျလာကတညျးက မသိကြေးကြှနျပွုနသေဖွငျ့ မကွနေပျခဲ့ရခွငျး ဖွဈသညျ။
အခုလဲကွညျ့ မသေူဟနျ တဈယောကျ အိမျရှေ့ ထှကျလာတော့ အောငျကိုနိုငျက ဆကျတီကုလားထိုငျတှငျထိုငျကာ အမိနျ့သား သတငျးစာဖတျ၍နသေညျ။ အငျး………..အိမျတှငျလညျး မာမီမရှိ၍ အတျောဖွဈ၍နေ၏။မသေူ၏အမေ ဒျေါခငျခငျသူမှာ နယျရှိလုပျငနျးခှငျမြားသို့ ခရီးထှကျသှားခဲ့သညျမှာ ဒီနဆေို့လြှငျ(၃)ရကျရှိခဲ့ပွီဖွဈသညျ။ နောကျထပျလညျး (၃-၄) ရကျခနျ့ကွာမှ ပွနျရောကျမညျဖွဈသညျ။ မသေူသညျ အောငျကိုနိုငျထိုငျ၍နသေော ဆိုဖာဆကျတီကုလားထိုငျဘေးသို့ ရောကျအောငျသှားလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ အောငျကိုနိုငျ၏ ရှတှေ့ငျ ရှိသော ဆကျတီစားပှဲအောကျမှ သတငျးစာနှငျ့မဂ်ဂဇငျးမြားကို ဟိုရှဒေီ့ရှေ့ လုပျပွီး တဈခုခုရှာသလိုလုပျနသေညျ။ ပွီးတော့ သူမသညျအောငျကိုနိုငျ ထိုငျနသေော ဆိုဖာဆကျတီ ကုလားထိုငျနှငျ့ စားပှဲအကွားသို့ သူမ၏ ခွထေောကျလေးတဈဖကျကို လှမျး၍တငျလိုကျသညျ။ထိုအခါတှငျ အောငျကိုနိုငျ၏ခွထေောကျတဈဖကျနှငျ့ သူမ၏ ခွထေောကျလေးတို့မှာ ထိကပျမိကွ၏။
ပွီးသညျနှငျ့ မသေူသညျ အောငျကိုနိုငျ ရှရှေိ့စားပှဲလေး၏ အောကျဖကျသို့ သူမ၏ခါးကိုကုနျးကာ ငုံ့၍ ကွညျ့လိုကျသညျ။သူမ၏စှငျ့ကားလှသော ဖငျသားလုံးလုံးတဈတဈကွီးမှာ အောငျကိုနိုငျ၏ မကျြနှာရှတှေ့ငျ (၆)လကျမလောကျပငျ မကှာခငျြတော့ပါ။သူမ၏ ဖငျသားကွီးတဈဖကျ၏ ဘေးစောငျးက သတငျးစာကို ကိုငျ၍ထားသော အောငျကိုနိုငျ၏ လကျတဈဖကျကို ဖိ၍ထိနသေေး၏။ အောငျကိုနိုငျသညျ သူ၏လကျကို မရုတျသိမျးသညျ့အပွငျ မသေူ၏ဖငျသားကွီးကို မသိမသာပငျ ဖိကပျပေးလိုကျသေးသညျ။ ဒျေါခငျခငျသူ၏ သငျပွစညျးရုံးမှုကွောငျ့ ရဲတငျးနသေော အောငျကိုနိုငျသညျ မိနျးမတို့၏အရသာကိုလညျး သိနသေညျ့အပွငျ ဒျေါခငျခငျသူမှာလညျး ခရီးထှကျသှားသညျမှာ (၃)ရကျခနျ့ကွာပွီဖွဈ၍ သူ၏သှေးသားမြားမှာ သဈလှငျလနျးဆနျး၍ နပွေီးတကျကွှနေ၏။ ယခုသညျပငျ သူ၏ပုဆိုးအတှငျးမှ လီးကွီးမှာ မာတောငျ၍ လာနပွေီဖွဈသညျ။
မသေူသညျ သူမ၏ခါးလေးကို ကုနျး၍ဆကျတီစားပှဲအောကျဆငျ့တှငျ ဟိုရှာဒီရှာဖွငျ့ ခပျကွာကွာလေး လုပျနပွေီးမှ သူ၏ခါးကိုပွနျဆနျ့လိုကျသညျ။ မခံခငျြစိတျနှငျ့သာ မူယာမာယာဖွငျ့ ထငျရာလုပျနခေဲ့ရပမေယျ့ မသေူ၏အသဲနုနလေးကတော့ တလှပျလှပျခံစားရကာ သူမ၏လကျဖြားလေးမြားပငျ အေးစကျ၍နရေ၏။ မသေူသညျ သူမ၏ခါးလေးကို ပွနျဆနျ့ကာ သူမ၏ခွထေောကျလေးကို လှမျး၍လှညျ့အထှကျတှငျ အယောငျယောငျ အမှားမှားဖွငျ့ သူမ၏ခွထေောကျလေးသညျ ဘာကိုသှား၍တိုကျသညျမသိ။ သူမ၏ကိုယျလုံးလေးမှာ အတျောလေးယိုငျအသှားတှငျ သူမ၏နောကျဘကျတှငျထိုငျ၍နသေော အောငျကိုနိုငျက သူ၏လကျနှဈဖကျဖွငျ့ သူမ၏ကိုယျလုံးလေးကို လှမျး၍ဆှဲကာ ထိနျးလိုကျသဖွငျ့ အတျောလေး ယိုငျနဲ့သှားသော မသေူ၏ကိုယျလုံးလေးသညျ အောငျကိုနိုငျ၏ပေါငျနှဈဖကျပျေါသို့ ’ဘုနျး” ဆိုလဲပွိုကသြှားတော့သညျ။
အောငျကိုနိုငျကသူ၏ ရငျခှငျအတှငျးသို့ လဲပွို၍ကလြာသော မသေူ၏ကိုယျလုံးလေးကို သူ၏လကျနှဈဖကျဖွငျ့ သိမျးကွုံး၍ဖကျထားလိုကျသညျ။နှေးထှေးအိစကျညကျညောသော မသေူ့ကိုယျလုံးလေး၏ အထိအတှကေ့ အောငျကိုနိုငျ၏ကိုယျပျေါမှသညျ အသှေးအသားထဲထိ စိမျ့၍ဝငျသှားတော့လသေညျ။ မသေူသညျလညျး တဈကိုယျလုံး ရှိနျးဖိနျး၍သှားခဲ့ရပွီး သူမ၏ကိုယျလုံးလေးသညျ တုနျတုနျယငျယငျဖွဈနေ၏။ သို့ရာတှငျ အောငျကိုနိုငျ၏ရငျခှငျအတှငျးမှ ရုနျး၍မထှကျမီခဲ့ပါ။ “…..မသေူ…..” “….ရှငျ……” “…..ဘာဖွဈသှားသေးလဲ….ဟငျ….” “……ဟငျ့…..အငျး……” “…….လနျ့သှားမှာပေါ့နျော…….” “……အငျး…….ဟုတျ……” အောငျကိုနိုငျက သူမ၏နားလေးနားသို့ သူ၏နှုတျခမျးလေးကိုကပျကာ မသေူ၏နားဖြားလေးကို သူ၏နှုတျခမျးဖြားလေးဖွငျ့ မထိတထိလေးလုပျလြှကျ နှဈကိုယျကွားလသေံလေးဖွငျ့ ပွောလိုကျသညျ။
မသေူကလညျး သူမ၏ဦးခေါငျးလေးကို ခပျငုံ့ငုံ့လေးလုပျကာ လသေံသဲ့သဲ့လေးဖွငျ့ပွနျပွောသညျ။ စကားပွောရငျးဖွငျ့ မသေူသညျ သတိပွုမိတာကတော့ သူမ၏ဖငျသားကွီးနှဈခု အလယျလောကျကို အောကျဖကျမှလာ၍ ထောကျမိနသေော မာတောငျနသေညျ့ရှညျမြောမြောအရာတဈခုပငျဖွဈသညျ။ ထိုအရာမှာ မသေူ၏ဖငျသားကွီးမြား၏ဖိအားကွောငျ့ တဒိတျဒိတျပငျဖွဈနကွေောငျး သူမ၏ဖငျသားကွီးမြားက ထိတှသေိ့ရှိလိုကျရသညျ။ စောစောက ပနျးနုရောငျပွေးနသေညျ့ သူမ၏မကျြနှာလေးမှာ နီမွနျး၍ သှားရတော့သညျ။ မသေူသညျ ရှကျကိုးရှကျကနျးဖွငျ့ ကွုံး၍ထသဖွငျ့ အောငျကိုနိုငျက သူမ၏ကိုယျလုံးလေးကို ဖကျ၍ထားသော လကျနှဈဖကျကို ဖယျ၍ပေးလိုကျသညျ။
မသေူသညျ အောငျကိုနိုငျ၏ရငျခှငျအတှငျးမှ ထကာအိမျရှတေံ့ခါးဝသို့ ထှကျ၍သှားသညျ။ပွီးလြှငျ သူမသညျ အိမျအပွငျသို့ထှကျရနျ ခွလှေမျးလိုကျသညျ။ “……မသေူ……” “……ရှငျ…….” အောငျကိုနိုငျမှာ ထိုငျရာမှထကာ အိမျရှတေံ့ခါးဝသို့လြှောကျလာပွီး တံခါးဝအရောကျတှငျ ရပျလိုကျသညျ။ မသေူကလညျး သူမ၏ဦးခေါငျးလေးကိုငုံ့လြှကျ တံခါးဝ၏ရှဖေ့ကျနားတှငျ ခပျပပေလေေးရပျ၍နသေညျ။ သူမ၏ မကျြနှာလေးမှာတော့ နီရောငျလေးဖွဈနသေေးသညျ။ “…….မသေူ…….ဟိုဘကျအိမျသှားမလို့လား…..” “…..အငျး…….ယဉျမြိုးခငျဆီသှားမလို့လေ……” “……သိပျပွီး မိုးမခြုပျစနေဲ့နျော……” “…..အငျး…ပါ……” “…….ကို…..အိမျရှမှေ့ာထိုငျပွီး……စောငျ့ပေးနပေါမယျ့……” ငုံ့၍ထားသော မသေူ၏ဦးခေါငျးလေးမှာ မော့၍လာပွီး သူမ၏အရညျလေးမြားလဲ့နသေော မကျြလုံးဝိုငျးဝိုငျးလေးမြားဖွငျ့ ဝငျ့ကာ တဈခကျြကွညျ့လိုကျသညျ။ပွီးတော့ သူမ၏ ဦးခေါငျးလေးကို တဈခကျြဆတျပွပွီး ခေါငျးလေးကိုပွနျ၍ငုံ့ကာ လြှောကျလှမျးသှားတော့သညျ။
ခွံဝသို့ရောကျသောအခါတှငျတော့ မသေူသညျခွံတံခါးကိုဖှငျ့၍ ထှကျလာလိုကျပွီး သူမကိုယျလုံးလေးကို နောကျဖကျသို့ပွနျလှညျ့ကာ ခွံတံခါးကို ပိတျလိုကျသညျ။ထိုအခါတှငျ အိမျရှတေံ့ခါးဝမှရပျ၍ သူမကို ကွညျ့နသေော အောငျကိုနိုငျကို တှမွေ့ငျလိုကျရ၍ သူမသညျခပျတှတှေလေေးရပျကာ ခတ်ေတမြှကွညျ့နလေိုကျပွီး ဆကျ၍ထှကျခဲ့တော့၏။ အိမျရှတေံ့ခါးတှငျ ရပျ၍ကွညျ့နသေောအောငျကိုနိုငျသညျလညျး သူ၏မွငျကှငျးထဲမှ မသေူ ပြောကျကှယျသှားတော့မှ အိမျရှတေံ့ခါးကိုပိတျလိုကျပွီး ဧညျ့ခနျးအတှငျးသို့ ပွနျ၍လြှောကျလာကာ မူလထိုငျခဲ့သညျ့ ဆကျတီဆိုဖာကုလားထိုငျပျေါသို့ ခွပေဈလကျပဈခလြိုကျပွီး သကျပွငျးတဈခကျြ မှုတျ၍ထုတျလိုကျတော့သညျ။
မသေူတဈယောကျ ယဉျမြိုးခငျတို့၏ အိမျသို့ရောကျတော့ အိမျတှငျ ယဉျမြိုးခငျတဈယောကျတညျးသာရှိပွီး သူမသညျဆငျဆာမဲ့တငျသှငျးထားသညျ့ စီဒီဇာတျလမျးကို ကွညျ့၍နသေညျ။မသေူ ရောကျလာသဖွငျ့ သူမတို့သူငယျခငျြးနှဈယောကျသညျ ဆကျ၍ဇာတျကားကိုကွညျ့ကွသညျ။ဇာတျကားမှာ ပွီးဆုံးကာနီးပွီဖွဈ၍ ဇာတျဝငျခနျးမြားမှာ ခပျကွမျးကွမျးဖွဈ၍လာ၏။ စောစောကတညျးက တဈကိုယျလုံး ဖိနျးရှိနျးကာ ကိုယျအတှငျးရှိ သှေးသားမြား ထကွှဆူပှကျခဲ့ရသော မသေူသညျ ဘလူးဇာတျဝငျခနျးမြားကို ကွညျ့ရငျးဖွငျ့သူမ၏သှေးသားတို့သညျ ပှကျပှကျဆူကာ ထလာခဲ့ရတော့၏။ ဇာတျလမျးပွီးဆုံးသှားခြိနျမှာတော့ မသေူ၏သှေးသားတို့သညျ ပေါကျကှဲခဲ့ရခပြွေီ။ ဇာာတျလမျးပွီးဆုံးသှားသညျနှငျ့ မသေူသညျနာရီကိုကွညျ့လိုကျတော့ ည(၉)နာရီပငျ ရှိပွီဖွဈ၍သူငယျခငျြးဖွဈသူ ယဉျမြိုးခငျကို နှုတျဆကျ၍ အိမျသို့ပွနျလာခဲ့သညျ။
အိမျရှတေံ့ခါးဝသို့ ရောကျသညျနှငျ့ ဧညျ့ခနျးထဲတှငျ ထိုငျ၍နသေော အောငျကိုနိုငျမှာ ထလာ၍ တံခါးဖှငျ့ပေး၏။ “……မသေူ…….ပွနျလာပွီလား…..” “…….ဟုတျကဲ့…….” မသေူသညျ အိမျရှတေံ့ခါးကို ပိတျ၍နသေော အောငျကိုနိုငျကို ရပျ၍စောငျ့နေ၏။အောငျကိုနိုငျက တံခါးပိတျပွီး လှဲ့၍လာသောအခါတှငျမှ သူမလညျး အောငျကိုနိုငျနှငျ့အတူ အိမျအတှငျးသို့ ဝငျ၍လာခဲ့၏။မာမီဆီက……ဖုနျးလာသေးလား…..” “……လာတယျ…..မသေူ……နောကျ(၃)ရကျလောကျနမှေ ပွနျလာဖွဈမယျတဲ့……” “……..အျော…….အငျး…….အငျး…….” မသေူ၏အသံလေးမြားမှာ အကျတကျတကျလေးဖွဈနေ၍ သူမ၏အာခေါငျလေးမြား ခွောကျသှနေ့သေညျကို အောငျကိုနိုငျက သတိပွုမိလိုကျသညျ။
အအေးသောကျဦးမလား……မသေူ…….” “…….ဟငျ့အငျး……အိပျတော့မယျ……” ပွောပွောဆိုဆို မသေူသညျ အိပျခနျးအတှငျးဖကျသို့ဝငျကာ သူမ၏အိပျခနျးအတှငျးသို့ဝငျ၍ သှားတော့၏။ မသေူသညျ သူမ၏အိပျခနျးရှသေို့ရောကျလြှငျ စေ့၍ထားသော သူမ၏အိပျခနျးတံခါးကိုဖှငျ့၍ ဝငျလိုကျသညျ။ပွီးသညျနှငျ့ သူမသညျ သူမအိပျစကျရာ ကုတငျဆီသို့သှားပွီး ကုတငျထကျရှိမှယေ့ာပျေါသို့ ခွပေဈလကျပဈ လှဲခြ၍အိပျလိုကျသညျ။ သူမသညျ အိပျယာထကျတှငျ ပကျလကျကလေးလှနျကာ မကျြလုံးလေးမြား ပိတျာထားသျောလညျး ယဉျမြိုးခငျတို့အိမျတှငျ စောစောက ကွညျ့ခဲ့ရသောဇာတျကားထဲမှ ဇာတျဝငျခနျးမြားမှာ သူမ၏အာရုံထဲတှငျ တဝဲလညျလညျဖွဈ၍နသေညျ။ အထူးသဖွငျ့ ဇာတျလမျးထဲမှ မငျးသားဖွဈသူ၏ကွီးမားတုတျခိုငျ၍ ပွဲလနျနသေော လီးကွီးမှာ သူမ၏အာရုံထဲမှ ဖြောကျ၍မရ။ထိုလီးကွီးကို မငျးသမိးက အားရပါးရ စုပျနပေုံ. မငျးသမီး၏စောကျပတျကွီးထဲသို့ အရညျတရှဲရှဲဖွငျ့ ဝငျလိုကျထှကျလိုကျ ဖွဈနပေုံနှငျ့ ထိုလီးကွီးမှ သုတျရညျမြား ပွှတျကနဲပွှတျကနဲ ထှကျနပေုံတို့မှာ မသေူ့ကို ဒုက်ခအပေးဆုံးဖွဈ၏။
မသေူသညျ အိပျယာထကျတှငျ ဘယျလူးညာလှိမျ့ဖွငျ့ အမြိုးအမညျမသိသော ဝဒေနာကို ပွငျးထနျစှာဖွငျ့ မခြိတငျကဲ ခံစားနရေ၏။(၁၅)မိနဈလောကျကွာမှ မသေူသညျ အိပျယာပျေါမှ လူးလဲထလိုကျပွီး ကုတငျပျေါမှဆငျးလိုကျ၏။ ပွီးတော့ သူမ၏အကငြ်္ီနှငျ့ဘရာစီယာတို့ကိုခြှတျလိုကျပွီး တနျးပျေါသို့တငျလိုကျကာ သူမ၏ခါးမှ ထဘီလေးကိုရငျလြားလိုကျသညျ။ပွီးလြှငျ အိပျခနျးအတှငျးတှငျ ဖှငျ့၍ထားသော မီးခြောငျးကိုပိတျ၍ ညအိပျမီးလုံးလေးကိုဖှငျ့ကာ ညဝတျအကငြ်္ီကိုပငျ မဝတျတော့ဘဲ ထဘီရငျလြားလေးနှငျ့ သူမ၏အိပျယာထကျသို့ ပကျလကျလေး ပွနျလှဲခလြိုကျတော့သညျ။ အိပျယာထကျတှငျ မသေူသညျ လူးကာလှိမျ့ကာဖွငျ့ (၅)မိနဈလောကျနပွေီးသောအခါတှငျမှ သူမသညျ ပကျလကျကလေးလှနျကာ သူမ၏လကျကလေးတဈဖကျဖွငျ့ သူမ၏စောကျဖုတျလေးကို ထဘီပျေါမှ စမျးလိုကျ၏။
သူမ၏စောကျဖုတျလေးမှာ ဖောငျးကားတငျး၍နသေညျ။ခံစားနရေသော ဝဒေနာကို သကျသာလိုသကျသာငွားဖွငျ့ သူမသညျ သူမ၏စောကျဖုတျလေးကို ထဘီပျေါမှပငျ ပှတျ၍ပေးနသေညျ။ ခဏအကွာတှငျတော့ သူမခံစားနရေသော ဝဒေနာမှာ သကျသာ၍ မသှားသညျ့အပွငျ ပို၍ပငျဆိုးလာသဖွငျ့ မသေူသညျ သူမ၏ထဘီလေးကို ခါးဆီသို့လှနျ၍တငျလိုကျရာ သူမ၏ဖွူဖှေးညကျညော နသေညျ့သူမ၏ ကိုယျအောကျပိုငျးလေးနှငျ့အတူ ဖွူဖှေးမို့ဖောငျး၍အမှေးနကျတိုတိုလေးမြား ခပျစိတျစိတျပေါကျနသေညျ့ သူမ၏စောကျဖုတျလေးသညျ ထမီအောကျမှထှကျပျေါ၍ လာခဲ့ရတော့၏။ ပွီးသညျနှငျ့ သူမသညျ စောကျဖုတျလေးကို သူမ၏လကျဖွငျ့ ပှတျ၍ပေးနမေိသညျ။နီနီရဲရဲလေးဖွဈနသေော သူမ၏စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားလေး နှဈခုတို့ ဆုံဆညျးရာ စောကျဖုတျအကှဲကွောငျးလေးတှငျ သူမ၏ စောကျရညျလေးမြားမှာ စိမျ့ထှကျနကွေပွီး နီတာရဲစောကျပတျနှုတျခမျးသားလေးမြားကို ရီးလေးခိုလြှကျ ရှိတော့၏။
မသေူသညျ သူမ၏စောကျပတျလေးကို ပှတျပေးနရောမှ သူမခံစားနရေသော ဝဒေနာကိုဆကျ၍ မခံစားနိုငျတော့သဖွငျ့ လကျလေးတဈဖကျဖွငျ့ သူမ၏စောကျပတျနှုတျခမျးသားလေးနှဈခုကို အသာလေးဖွဲကာ ကနျြလကျတဈဖကျ၏ စောကျပတျဝကို ကလိပေးနသေညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ အိမျရှေ့ဧညျ့ခနျးထဲမှ သူ၏အိပျခနျးဆီသို့ ဝငျ၍လာသော အောငျကိုနိုငျသညျ မသေူဟနျ၏ အိပျခနျးရှသေို့အရောကျတှငျ သူမ၏ အိပျခနျးတံခါးမှာ ခပျဟဟလေးဖွဈနသေဖွငျ့ အိပျခနျးအတှငျးသို့ ခြောငျး၍ကွညျ့လိုကျမိသညျ။ အိပျခနျးတံခါးဝနှငျ့ ခွောကျပမြှေသာဝေးသောကုတငျပျေါရှိ မသေူ၏အဖွဈကို သူသညျတှမွေ့ငျ လိုကျရတော့သညျ။ အောငျကိုနိုငျကွညျ့နစေဉျမှာပငျ မသေူသညျ သူ၏လကျညှိုးထိပျလေးဖွငျ့ သူမ၏စောကျပတျဝကို ကလိပေးနရောမှ စောကျပတျထဲသို့ သူ၏လကျညှိုးကို ဖွေးဖွေးခငျြးသှငျး၍ နသေညျ။
သူမ၏ပေါငျနှဈဖကျလုံးမှာ ခပျကားကားလေး ထောငျထားပွီး သူမ၏ ခါးလေးကိုလညျး နဲနဲကော့ထားသညျ။ အိပျခနျးဝတှငျ ရပျလြှကျ ကွညျ့၍နသေော အောငျကိုနိုငျ၏ ပုဆိုးအတှငျးမှ လီးကွီးသညျလညျး မာတောငျ၍ လာခဲ့ရပွီဖွဈသညျ။ ခဏမြှအကွာတှငျ မသေူသညျ သူမ၏စောကျပတျအတှငျးမှ လကျနှဈဆဈ လောကျသှငျးကာ ဖွေးဖွေးခငျြး ပွုလုပျပေးနရောမှ သူမ၏လကျညိုးကို စောကျပတျအတှငျးသို့ ခပျသှကျသှကျပငျ ထုတျခြီသှငျးခြီ ပွုလုပျ၍လာ၏။သူမ၏ မကျြလုံးလေးမြားကတော့ မှိတျထားလြှကျရှိကွ၏။ “……..မသေူ…..” “…..မသေူ…..” အောငျကိုနိုငျသညျ အိပျခနျးတံခါးနားကပျ၍ အသံခပျအုပျအုပျဖွငျ့ ချေါလိုကျသညျ။ “……မသေူ….” “….အငျ……ရှငျ…..” “……..ကိုယျပါ…….တံခါးဖှငျ့ပေးပါဦး…….” “…….အျော……အငျး……လာ…….လာပွီ…….” ခဏအကွာတှငျတော့ မသေူ၏အိပျခနျးတံခါးမှာ ပှငျ့၍လာပွီး မသေူသညျ ထမီရငျလြားလေးဖွငျ့ မတျတပျရပျလကျြလေး တှလေို့ကျရ၏။
အိပျခနျးတံခါးပှငျ့သှားသညျနှငျ့ အောငျကိုနိုငျသညျ အိပျခနျးအတှငျးသို့ ဖွတျကနဲ လှမျး၍ဝငျလိုကျပွီး အခနျးတံခါးကို နောကျပွနျပိတျလိုကျပွီး ကွောငျ၍ကွညျ့နသေော မသေူ၏လကျဖြားလေးကို သူ၏လကျဖွငျ့ လှမျး၍ဆုပျကိုငျလိုကျသညျ။သူမ၏ လကျညိုးလေးတှငျ ကပျစေးစေး လေးဖွဈနသေညျကို အောငျကိုနိုငျ၏ လကျမှတဆငျ့တှထေိ့ခံစားလိုကျရ၏။ပွီးသညျနှငျ့ အောငျကိုနိုသညျ မသေူ၏ကိုယျလုံးလေးကို ဆှဲ၍ဖကျလိုကျပွီး သူမ၏နှုတျခမျးလေးကို သူ၏နှုတျခမျးဇွငျ့ ဖိကပျစုပျနမျးလိုကျရာ မသေူသညျ သူမ၏ရငျဘတျလေးကို ကော့၍ သူမ၏မကျြနှာလေးမှာ မော့၍တကျလာသညျ။
ပွီးသညျနှငျ့ အောငျကိုနိုငျသညျ သူမ၏နှုတျခမျးလေးကို စုပျလြှကျကပငျ မသေူ၏ ကိုယျလုံးလေးကို စှကေ့နဲပှကေ့ာ ကုတငျရှိရာသို့ လြှောကျလှမျးသှားပွီး သူမ၏ကိုယျလုံးလေးကို ကုတငျပျေါသို့ ပကျလကျကလေးတငျလိုကျပွီး သူ၏နှုတျခမျးမြားကို သူမ၏နှုတျခမျးမြားမှခှာကာ ခါးဆနျ့လိုကျပွီး အောငျကိုနိုငျသညျ သူ၏အကငြ်္ီနှငျ့ပုဆိုးတို့ကို ခြှတျခလြိုကျတော့သညျ။ပွီးလြှငျ အိပျယာပျေါတှငျ မကျြလုံးလေးမှိတျကာ ပကျလကျကလေးဖွဈနသေော မသေူ၏ကိုယျလုံးလေးပျေါမှ ရငျလြား၍ထားသော ထမီလေးကို သူမ၏ခွထေောကျတဈဖကျသို့ ဆှဲ၍ခြှတျလိုကျရာ မသေူကလညျး သူမ၏ဖငျသားကွီး မြားကို ကွှ၍ပေးလိုကျသဖွငျ့ ထမီလေးမှာ ကှငျးလုံးကြှတျ၍ ထှကျသှားတော့သညျ။
ထိုအခါတှငျ ဖွူဖှေးနုနယျ၍ ညကျညောနသေညျ့ သူမ၏ဝတျလဈစလဈကိုယျလုံးလေးမှာ မကျမောဖှယျရာထှကျပျေါလာသဖွငျ့ အောငျကိုနိုငျသညျ ကုတငျပျေါသို့တကျလိုကျပွီး သူမ၏ကိုယျလုံးလေး ကို ဖကျလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ မသေူ၏ဝငျးမှညျ့နသေော နို့လေးမြားကိုငုံ့၍စို့ပေးလိုကျသညျ။မသေူ့ရငျဘတျလေးမှာ ကွှတကျလာသညျ။အောငျကိုနိုငျသညျ မသေူ့နို့လေးမြားကို ဘယျပွနျညာပွနျစို့ပေးနရေငျးမှ လကျတဈဖကျကို မသေူ၏စောကျဖုတျပျေါသို့ အုပျ၍ပှတျပေးနသေညျ။အောငျကိုနိုငျသညျ မသေူ၏နို့လေးမြားကို စို့ပေးနရေငျးမှ သူ၏နို့သီးခေါငျးလေးမြားကို လြှာဖြားလေးဖွငျ့ယကျကာကလိပေး၏။ စောကျပတျလေးကို ပှတျပေးနသေော သူ၏လကျညိုးထိပျကလေးသညျ မသေူ၏စောကျပတျအကှဲကွောငျးလေးအတှငျးသို့ တိုး၍ဝငျသှားပွီး သူမ၏စောကျစကေ့လေးကို ကလိပေးနလေိုကျသေးသညျ။
အောငျကိုနိုငျ၏လီးကွီးသညျလညျး တဆတျဆတျဖွဈနပွေီး လီးကွီးထိပျတှငျတော့ အရညျမြားမှာ စိုရှဲနပွေီဖွဈသညျ။ မသေူသညျ အိပျယာထကျတှငျ ပကျလကျကလေးနကော သူမ၏မကျြလုံးလေး မြားကိုမှိတျ၍ထားပွီး သူမ၏လကျကလေးနှဈဖကျကတော့ သူမ၏ဦးခေါငျးဝဲယာ ဘေးတဈဖကျတဈခကျြဆီသို့ တံတောငျဆဈမှ ကှေးကာတငျထားပွီး သူမ၏လကျဖဝါးလေးနှဈခုကတော့ ကဈြကဈြပါအောငျ ဆုတျ၍ထားကွ၏။နောကျတော့ အောကျကိုဆငျးပွီး မသေူ့စောကျပတျလေးကို လကျဝါးလေးနဲ့ ခပျဖှဖှလေးအုပျ ကာ ပှတျပေးလိုကျ၊ ပေါငျတှငျးသားလေးကို ပှတျပေးလိုကျနဲ့မို့ မသေူလညျး ရမကျတှကွှေလာပါတယျ။ ပါးစပျက လညျး ငှကျဖြားတကျသလို တဟငျးဟငျးနဲ့ ဖွဈလာပါတယျ။
အောငျကိုနိုငျလြှာကွီးကလညျး အောကျကို တဖွညျးဖွညျးဆငျးလာပွီး ခကျြနားတဈဝိုကျ ရဈဆှဲပေးလိုကျရငျး ပေါငျခွံနားရောကျတော့ စောကျပတျကိုမယကျသေးပဲ ပေါငျတှငျးသားလေးတဈလြှောကျ စုနျခြီဆနျခြီ ယကျတငျပေး လိုကျရာ မသေူမှာ ပိုပွီးမရိုးမရှတှဖွေဈလာကာ အောငျကိုနိုငျ့ခေါငျးကို သူ့စောကျပတျနဲ့ တညျ့အောငျအတငျးဆှဲကပျ လိုကျပါတယျ။ ဒီတော့မှ အောငျကိုနိုငျလညျး မသေူတငျပါးအောကျကို ခေါငျးအုံးလေးခံပေးလိုကျရငျး စအိုဝလေးကနေ စောကျစလေ့ေးအထိ တောကျလြှောကျ လြှာပွားကွီးနဲ့ သိမျးယကျပေးလိုကျရာ “ ရှီး…လား…လား….လား..ကိုရယျ ” အောငျကိုနိုငျလညျး အခကျြနှဈဆယျလောကျ ဆကျတိုကျအပျေါအောကျ ဆှဲပေးလိုကျရငျး လကျခလယျလေးနဲ့ စအိုဝကို မထိတထိလေး ပှတျလိုကျရငျး လြှာကိုစောကျခေါငျးထဲ ထိုးသှငျး ပေးလိုကျရာ မသေူမှာ ကော့ပွနျ လနျနပေါတော့တယျ။ အောငျကိုနိုငျလညျး စောကျခေါငျးထဲမှာ အားရအောငျလုပျပေးပွီးနောကျ လကျခလယျကို စောကျခေါငျးထဲ ထိုးသှငျးပွီး လြှာကလညျး စောကျစတေ့ဈခုတညျးကိုသာ ဦးစားပေး ယကျပေးလိုကျပါတယျ။
အောကျက မသေူလဲ ဖီးတှအေရမျးတကျလာပွီး စောကျပတျနဲ့အောငျကိုနိုငျ့မကျြနှာကှာသှားမှာစိုးတဲ့အလား အောငျကိုနိုငျ့ခေါငျးကို အတငျးဖိကပျ ထားပါတယျ။ငါးမိနဈလောကျလုပျပေးလိုကျတော့မသေူတဈယောကျ ကော့တကျလာကာ စေါကျဖုတျက အောငျကိုနိုငျ လကျကိုပှစိပှစိနဲ့ ညှဈရငျး ငွိမျကသြှားပါတယျ။ အောငျကိုနိုငျလဲ ပုဆိုးကိုခြှတျခလြိုကျပွီး လီးကို မသေူ့လကျကလေးထဲ ထညျ့ပေးလိုကျ သညျ ..။ “ အကွီးကွီးဘဲ..ကိုရယျ …. ” မသေူက လကျနဲ့ ဆုတျကိုငျဖဈြညှဈနရေငျး ရုတျတရကျ ခေါငျးလေးငုံ့ခပြွီး သူ့အကောငျကွီးကို ငုံကာ စုတျပေးပါတော့ သညျ ..။ ဒီအခွအေနအေထိ ဖွဈလာလိမျ့မယျလို့ သူလုံးဝ ထငျမထားခဲ့ ..။မသေူ သညျ မစုတျတတျ စုတျတတျ နဲ့ သူ့အတနျခြောငျး ကို စုတျပေးနေ သညျ ..။
တခါတခါ မသေူ့သှားနဲ့ သူ့အကေောငျရဲ့ ထိပျဖူး ကွီး ခွဈမိသလိုလို မို့ သူ တှနျ့သှား သညျ ..။ မသေူက မော့ကွညျ့ပွီး ဆကျစုတျနပွေနျ သညျ ..။ တခကျြတခကျြ ပွှတျကနဲ ပွှတျကနဲ အသံမြား ထှကျပျေါနေ သညျ ..။ မသေူ့လြာခြှနျခြှနျလေး က သူ့ထိပျဖူးကွီးရဲ့ အထဈကွားထဲကို ထိုးမှကေစားနေ သညျ ..။ “အို..ဟို…..ရှီး …. မသေူရယျ . ..” မသေူ သညျ သူ့အတနျအရငျးအထိ တဆုံးငုံငုံ စုတျနသေညျ ..။ ကောငျးလိုကျတာ..သူ့အမေ ဆီက မရတာ နှဈပေါငျးကွာလှပွီ ဖွဈတဲ့ ပုလှကေို မသေူ သူ့ကို ပီပီပွငျပွငျ ပေးနေ သညျ ..။ အစုတျမခံရတာကွာလို့လားမသိ ..။ မသေူစုတျပေးတာနှငျ့ ပွီးခငျြလာသညျ ..။
ဒီအတိုငျးဆကျသှားရငျ ထိနျးထားဘို့ မလှယျတော့တာနဲ့… မသေူ့ပါးစပျထဲက လီးတံကို မထုတျခငျြပမေယျ့ ဆှဲထုတျပွီး မသေူ့ကို ပကျလကျလေး အိပျခိုငျးလိုကျရတယျ.ပွီးတေျာ့ အောငျကိုနိုငျ လဲ မသေူထောငျထားသော ပေါငျနှဈခြောငျးရှသေို့ သူ့ကိုယျလုံးကိုပွောငျးရှလေို့ကျပွီး သူမ၏ပေါငျနှဈခြောငျးကို ကားကာဒူးထောကျ၍ဝငျကာထိုငျလိုကျပွီး သူမ၏လီးကွီးကို မသေူ၏စောကျပတျဝတှငျတကေ့ာ ဖွေးဖွေးပငျဖိ၍ သူမ၏စောကျပတျထဲသို့ လီးကွီးကို ဖိ၍သှငျးလိုကျသညျ။ အငျ့…..အ…….ဗဈြ…..ဗဈြ….ဟငျ့…..အား……အငျး……” မသေူ၏ ခါးလေးကော့တကျလာပွီး သူမ၏ကိုယျလုံးလေးမှာ တဆတျဆတျ တုနျ၍နသေညျ။မသေူသညျ သူ့အောကျနှုတျခမျးလေးကို ကိုကျကာမာနျတငျးထားလသေညျ။မသေူ၏စောကျပတျထဲသို့ လီးကွီးတဈဝကျနီးပါးမြှဝငျသှားပွီးသောအခြိနျတှငျ လီးကွီး၏ထိပျတှငျစောကျပတျထဲမှ အရာတဈခုက ခပျတငျးတငျးလေးကာဆီးထားနသေညျကို အောငျကိုနိုငျသညျ ခံစားသိရှိလိုကျသညျ။
ထိုအခါတှငျ အောငျကိုနိုငျသညျ သူ၏လီးကွီးကို မသေူ၏စောကျပတျထဲသို့ဆကျ၍ မသှငျးသေးဘဲ သူ၏ခါးကို ညှတျကာ မသေူ၏နို့လေးမြားကို ငုံ့၍ဘယျပွနျညာပွနျ စို့ပေးနလေိုကျသညျ။ခဏနတေော့မှ စောကျပတျထဲသို့ ဝငျ၍သှားသော လီးတနျကွီးတဈဝကျမြှကို ဖွေးဖွေးခငျြးဆှဲ၍ထုတျကာ ဖွေးဖွေးခငျြးပငျပွနျ၍ စောကျပတျ အတှငျးသို့ ဖိ၍သှငျးလိုကျပွီး နို့စို့လြှကျကပငျ အောငျကိုနိုငျသညျ လီးတနျကွီး တဈဝကျမြှနှငျ့ပငျ ဖွေးဖွေးခငျြးလိုး၍ ပေးနတေော့၏။ စောကျပတျထဲသို့ တဈဝကျမြှပငျ လိုး၍ပေးနသေော သူ၏လီးကွီးကို ထိပျဖူးကွီးအဖြားနားထိဆှဲ၍ထုတျလိုကျပွီး တရှိနျထိုးပငျ သူ၏လီးကွီးကို မသေူ၏စောကျပတျထဲသို့ လီးတနျကွီးကို တဆုံးဝငျအောငျ ဆောငျ့၍ လိုးသှငျးလိုကျပါတော့သညျ။
အ…..အား…….အမလေး…..အ……ကြှတျ…..ကြှတျ…..အမလေး……နာတယျ……ဟငျ့….အ…..” “……မသေူ….” “…..အရမျးနာလို့လားဟငျ……” “……အငျး…..ဖွေးဖွေးလုပျ…..” “……အငျး…..ဒါဆို….ကိုယျဖွေးဖွေးလိုးပေးမယျနျော……” မသေူက မကျြလုံးလေးမှိတျထားလကျြက ခေါငျးငွိမျ့ပွသညျ။ “……ဖှတျ….ဘှတျ…..ပလှတျ…..” “……ဖှတျ……ဘှတျ…..ပလှတျ…..” မသေူ၏ လကျကလေးနှဈဖကျမှာ နို့စို့ရငျးလိုးပေးနသေော အောငျကိုနိုငျ၏ကြောပွငျသို့ ဖကျတှယျလာခဲ့ပွီး သူမ၏လကျဖဝါးလေးဖွငျ့ပငျ ခပျဖွေးဖွေး အောငျကိုနိုငျ၏ကြောပွငျကိုပှတျ၍နသေေး၏။ အောငျကိုနိုငျက အားဖွငျ့ဖိ၍ ဆောငျ့ကာလိုးလာသညျဆိုလြှငျပဲ သူတို့နှဈယောကျစလုံးမှာ အရသာမြား ရှိလာကွပွီဖွဈသညျ။အောငျကိုနိုငျက မသေူ၏စောကျပတျထဲသို့ ဆောငျ့၍လိုးလိုကျတိုငျး သူမ၏ စောကျစလေ့ေးကိုပါ ဖိ၍ဖိ၍ ထိသှားရသဖွငျ့ မသေူမှာ အလိုးခံနရေငျးအရသာမြားမှနျထူလာကာ သူမ၏ နှုတျခမျးလေးမြားပငျ တဆတျဆတျဖွဈ၍လာရသညျ။
မသေူ…..ကောငျးလားဟငျ……အငျး…..ကိုရော….ဟငျ…..သိပျကောငျးတာဘဲ…..မသေူရယျ…..အ….အား….” အောငျကိုနိုငျသညျ အခကျြ(၄၀)ခနျ့ဆောငျ့ခလြိုးပွီးသညျနှငျ့ သူ၏လီးကွီးမှာ အီဆိမျ့၍လာပွီးဖွဈ၍ နို့စို့ပေးလကျြကပငျ အားကုနျထုတျ၍ အခကျြ(၂၀)မြှဆောငျ့ကာလိုးလိုကျပါတော့၏။အား……အမလေး……ကိုရယျ…….အငျး….ဟငျး… မသေူမှာ အောကျကနပွေီး ဖငျကွီးကိုကော့တကျလကျြ လကျမြားက အောငျကိုနိုငျ၏လကျမောငျးမြားကို ဆုတျတငျးလိုကျသညျ။အကငျးပါးသော အောငျကိုနိုငျသညျ လီးကွီးကိုအဆုံးထိ ထုတျလိုကျပွီး ပွနျ၍အားကုနျဆောငျ့ပေးနသေညျ။ဂှေးဥကွီးမှ မသေူ၏ဖငျသားကွီးမြားကို တဖတျဖတျရိုကျသံပငျ အခနျးထဲမှာ ပြံ့လှငျ့နပေတေော့သညျ။ သူတို့နှဈဦးသညျ တဈဦးကိုတဈဦး ထှေးအောငျဖကျထားကွပွီး အောငျကိုနိုငျ၏လီးကွီးထိပျမှ ပွဈခဲသော သုတျရညျတို့သညျ မသေူ၏အပြိုစငျသားအိမျလေးဆီသို့ တရှိနျထိုးပနျးသှငျးလိုကျလတေော့သညျ ……ပွီးပါပွီ။
အောင်ကိုနိုင်နှင့်ဒေါ်ခင်ခင်သူတို့၏ ဝတ်လစ်စလစ် ခန္ဒာကိုယ်နှစ်ခုသည် သိမ့်သိမ့်တုန်၍သွား၏။သူတို့ နှစ်ဦးသည် တယောက်ကိုတယောက် သိမ်းကြုံးကာ တင်းကြပ်စွာဖြင့် ဖက်ထားကြ၏။ ခဏမျှအကြာတွင်တော့ သူတို့၏ ကိုယ်နှစ်ခုသည် တဖြေးဖြေးငြိမ်ကျသွားရတော့သည်။ အောင်ကိုနိုင်၏ဦးခေါင်းသည် မျက်လုံးနှစ်လုံးပိတ်၍ ပက်လက်လေး မှိန်းနေသော ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် မှောက်လျှက်သားဖြစ်ကာ ပါးချင်းအပ်လျှက်ရှိ၏။ (၅)မိနစ်မျှ ကြာသွားသောအခါတွင် အောင်ကိုနိုင်၏ကျောပြင်ကို ဖက်ထားသော ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏လက်နှစ်ဖက်မှာ ဖြေးဖြေးချင်း လှုပ်ရှားလာလျှက် အောင်ကိုနိုင်၏ ကျောပြင်ကျယ်ကြီးကို သူမ၏လက်ဖဝါးလေးဖြင့် ပွတ်သပ်၍ပေးလာ၏။
ပြီးတော့ သူမနှင့် ပါးချင်းကပ်လျှက် မှောက်လျက်သားလေးရှိနေသော အောင်ကိုနိုင်၏မျက်နှာဘက်သို့ ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် သူမ၏ပက်လက်လှန်၍ထားသော မျက်နှာလေးကို လှည့်ကာ အောင်ကိုနိုင်၏ ပါးပြင်သို့ သူမ၏နှာသီးဖျားလေး ဖိသွင်းလျှက် ရှိုက်ကာရှိုက်ကာဖြင့် အားပါးတရနမ်းလိုက်လေသည်။ထိုအခါတွင်တော့ သူမ၏မျက်နှာလေးဘေးမှ မှောက်လျက်သားရှိနေသော အောင်ကိုနိုင်၏ဦးခေါင်းသည်ခေါင်းထောင်၍ ထာလာလေသည်။ အောင်ကိုနိုင်သည် သူ၏ဦးခေါင်းကိုထောင်လိုက်ပြီးသည်နှင့် ပက်လက်လေးပြန်ဖြစ်၍သွားသော ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ မျက်နှာလေးကို ကြည်ကြည်နူးနူးဖြင့် တစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေလိုက်သည်။ပြီးတော့ သူမ၏မျက်နှာလေးအနှံ့ကို သူ၏နှာခေါင်းဖြင့် တစ်ချက်ချင်းနမ်း၍နေ၏။ဒေါ်ခင်ခင်သူကလည်း သူမ၏မျက်လုံးလေးနှစ်ဖက်ကို မှေးမှိတ်လျက် ကျေနပ်ပြုံးလေးပြုံးယောင်သမ်းကာ သူမ၏မျက်နှာလေးကို မော့မော့လေးပေးကာ အနမ်းခံ၍နေသည်။
ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏မျက်နှာလေးအနှံ့ကို အားရအောင်နမ်းပြီးသည်နှင့် အောင်ကိုနိုင်သည် ဖူးဖူးလုံး၍ထနေသော သူမ၏နှုတ်ခမ်းလေးကို သူ၏နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာဖြင့် ငုံ၍စုပ်ယူကာ နမ်းလိုက်တော့………. ဒေါ်ခင်ခင်သူကလည်း အောင်ကိုနိုင်၏ နှုတ်ခမ်းများကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ကာ နမ်းပေးသည်။ပြီးတော့ သူမ၏လျှာဖျားလေးဖြင့် အောင်ကိုနိုင်၏နှုတ်ခမ်းလေးများကို ပွတ်သပ်၍ပေးသည်။ အောင်ကိုနိုင်၏ လီးကြီးကတော့ ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏စောက်ပတ်ထဲတွင်သာ တဆုံးသွင်း၍ ထားလျှက်ပင်ရှိသေး၏။ သူမ၏စောက်ပတ်ထဲရှိ အောင်ကိုနိုင်၏ လီးကြီးမှာ တစ်ချီပြီးသွားခဲ့သော်လည်း လုံးဝ လုံးဝပင်ကျ၍မသွားဘဲ လီးကြီးမှာ ပို၍ပင် ကြီးမားသန်မာလာသည်ဟု ထင်ရ၏။
သံချောင်းကြီးသဖွယ် မာ၍တောင်နေသဖြင့် ဒေါ်ခင်ခင်သူမှာ ကြိတ်၍ကြေနပ်နေမိတော့လေသည်။ အောင်ကိုနိုင်သည် သူ၏လီးတန်ကြီးကို ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏စောက်ပတ်ကြီးအတွင်းမှ မချွတ်ရသေးသည့်အတွက် သူ၏ကိုယ်လုံးသည် ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ထောင်၍ထားသော ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် ရှိ၍နေသေး၏။ သူတို့နှစ်ဦးသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဖက်လျှက်နှုတ်ခမ်းချင်းများတေ့လျှက် စုပ်၍နမ်းနေကြစဉ်မှာပင် ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ပေါင်တံကြီးများသည် သူမ၏ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင် ရှိနေသေးသော အောင်ကိုနိုင်၏ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးကို သူမ၏ဝတ်လစ်စလစ် ပေါင်သားနုနုလေးများဖြင့် ပွတ်သပ်၍ပေးလာ၏။ အတန်ငယ်မျှ ကြာသွားပြီးသောအခါတွင် အောင်ကိုနိုင်သည် ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏နှုတ်ခမ်းသားများဆီမှ သူ၏နှုတ်ခမ်းများကို ဆွဲ၍ဖြုတ်လိုက်ကာ သူမ၏ဦးခေါင်းကိုထောင်၍ ထလိုက်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို သူမ၏ကိုယ်လုံးဘေးနှစ်ဖက်တွင် တစ်ဖက်တစ်ချက်စီ ထောက်၍ဆန့်တန်းလိုက်လေသည်။
ပြီးသည်နှင့် ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏စောက်ပတ်ထဲမှ သူ၏လီးကြီးကို ဆွဲ၍ဖြေးဖြေးချင်း ထုတ်လိုက်သဖြင့် ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် အောင်ကိုနိုင်၏ခါးကို သူမ၏လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် လှမ်း၍ကိုင်လိုက်ပြီး သူမ၏ကိုယ်ပေါ်သို့ပြန်ချပြီးသည်နည်းတူ သူမ၏ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဖင်သားကြီးများကိုလည်း မြောက်ကြွ၍ သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးကို ကော့၍ ကေ့ာ၍ပေးလိုက်သည်။ ထိုအခါတွင် သဘောပေါက်နားလည်လွယ်သော အောင်ကိုနိုင်က ထိပ်ဖူးနားအထိ ဆွဲထုတ်ထားပြီးသောသူ၏လီးကြီးကို ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ စောက်ပတ်ကြီးထဲသို့ ခပ်ဆတ်ဆတ်ပင်ပြန်၍ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး သည်နှင့် ခပ်သွက်သွက်ပင်ဆောင့်၍ ဖိကာဖိကာ လိုးတော့သည်။တစ်ချီပြီးသွားခဲ့သော အရည်များမှာ သန့်စင်ရခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက် ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏စောက်ပတ်ထဲတွင် ပြည့်လျှံ၍နေသည်။
အောင်ကိုနိုင်၏လီးကြီးမှာ ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ ဆောင့်၍သွင်းလိုက်တိုင်း သူမ၏စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်များသည် အန်၍ထွက်လာသကဲ့သို့ အောင်ကိုနိုင်၏လီးကြီးသည် သူမ၏စောက်ပတ်ကြီး ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါတွင်လည်း စောက်ပတ်အတွင်းမှ အရည်များသည် လီးကြီးနှင့်အတူ ကပ်ညှိ၍ပါလာကာ အပြင်ဖက်သို့ ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ ထွက်၍ကျလာတော့၏။ အချက်(၃၀)မျှဆောင့်၍ လိုးပြီးသောအခါတွင် နောက်ထပ်ဆောင့်၍လိုးရန် အောင်ကိုနိုင်သည် သူ၏လီးကြီးကို ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏စောက်ပတ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်ချိန်တွင် ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် ရုတ်တရက်ကွေး၍ ထောင်ထားသော သူမ၏ပေါင်နှစ်ဖက်ကို အမြန်ပင်ဆန့်၍ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို စင်းလိုက်ပြီးသည်နှင့် သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို စောင်းကာဘေးသို့ လှိမ့်ထွက်လိုက်သဖြင့် သူမ၏စောက်ပတ်အတွင်းမှ အောင်ကိုနိုင်၏ လီးကြီးမှာ ကျွတ်၍ထွက်သွားရတော့၏။
ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် ကုတင်ပေါ်တွင် ထ၍ထိုင်လိုက်ပြီး ကုတင်ဘေးကြမ်းပြင်တွင် ကွင်းလုံးကျွတ်၍ချထားသော အောင်ကိုနိုင်၏ပုဆိုးကို ငုံ့၍ကောက်လိုက်၏။ပြီးတော့ သူမ၏ဘေးတွင် ဒူးထောက်ရပ်သားဖြစ်၍နေသော အောင်ကိုနိုင်ဖက်သို့ လှည့်လိုက်လေ၏။ အောင်ကိုနိုင်၏ လီးကြီးမှာ အရည်များပေပွလျက်ပြောင်၍တင်းနေကာ အသဲယားဖွယ်ကောင်းလှ၏။ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် အောက်ကိုနိုင်၏လီးကြီးကို တစ်ချက်မျှတွေကာ ကြည့်လိုက်ပြီးမှ သူမ၏လက်အတွင်းမှ ပုဆိုးဖြင့် အောင်ကိုနိုင်၏လီးတန်ကြီးကို သုတ်ကာသန့်စင်ပေးသည်။ပြီးတော့ အောင်ကိုနိုင်၏ လမွှေးအုံနှင့် ပေါင်ခြံများကို ပုဆိုးဖြင့် သုတ်လျှက် စိတ်တိုင်းကျ သန့်စင်ပေးရ၏။ ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် အသက်(၃၆)နှစ်ရှိပြီး သူမ၏အရပ်မှာ (၅)ပေ(၇)လက်မလောက်ရှိ၏။
သူမ၏ ကိုယ်လုံးအချိုးအစားမှာ လုံးကြီးပေါက်လှဖြစ်ပြီး အသားအရည်မှာ ဖြူဝင်း၍နေသည်။ ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် အသက်(၁၈)နှစ်ရှိ ဒုတိယနှစ် ကျောင်းသူ မေသူဟန် မိခင်ဖြစ်ပြီး သူမ၏ ခင်ပွန်း ဦးကျော်သီဟသည် လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ်ခန့်ကပင် ဆုံးပါးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခင်ပွန်းသည် မရှိသည့်နောက်တွင် ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် Company လုပ်ငန်းများကို သူမကိုယ်တိုင် ဦးစီး၍ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။လုပ်ငန်းများသည် သူမ၏လက်ထက်တွင်ပို၍ အောင်မြင်ကာ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ Company မှနယ်တွင် ဆောင်ရွက်၍နေသည့် လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် သွားရောက်ခဲ့ရင်း နယ်ရှိလုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်လျှက်ရှိသော အောင်ကိုနိုင်ကိုတွေ့ခဲ့ရလေသည်။ အောင်ကိုနိုင်၏လုပ်ရည်ကိုင်ရည်များကြောင့် နယ်ရှိလုပ်ငန်းများကို ကြီးကြပ်နေသူများကလည်း သူ့ကိုသဘာကျ၏။ဒေါ်ခင်ခင်သူကလည်း အောင်ကိုနိုင်ကို မြင်မြင်ချင်းပင် ခင်မင်မိ၍ ရန်ကုန်ရှိ company ရုံးချုပ်တွင် တာဝန်ပေးရန် ခေါ်ဆောင်လာသည်။
အောင်ကိုနိုင် ရန်ကုန်သို့ရောက်ပြီးသောအခါတွင် သူမ၏နေအိမ်တွင် လာရောက်နေထိုင်စေပြီး ကွန်ပျူတာသင်တန်းနှင့် စာရင်းကိုင်သင်တန်းတို့ကို (၁၀)တန်းအောင်မြင်ပြီးဖြစ်သော အောင်ကိုနိုင်ကို တက်ရောက်စေခဲ့သည်။ ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် အောင်ကိုနိုင်၏နေရေးစားရေါ်အားလုံးကို လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ပင် ပေးကမ်းကျွေးမွေး ထောက်ပံ့၍ ထားခဲ့သည်။ သဒ္ဒါလွန်တော့ တဏှာကျွန်ဖြစ် ဆိုတာမျိုးလို ယောက်ျားနှင့် (၅)နှစ်ကျော် ကင်းကွာနေခဲ့ရသော ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် သူမနှင့် လက်ပွန်းတနီးနေထိုင်ခဲ့သည့် အောင်ကိုနိုင်၏အပေါ်တွင် တိမ်းညွတ်၍ လာခဲ့ရသည်။ အောင်ကိုနိုင်က သူမအပေါ်တွင်စိတ်ဝင်စားလာအောင် အမျိုးမျိုးသော သိမ်မွေ့သော နည်းလမ်းများဖြင့် စွမ်းဆောင်ခဲ့ရာတွင် အသက်(၂၃)နှစ်သာရှိပြီး မိန်းမများနှင့် ရောရောထွေးထွေး မနေခဲ့ဘူးသည့် အောင်ကိုနိုင်သည် သူမ၏ကွန်ယက်အတွင်းမလှုပ်နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရလေသည်။
အောင်ကိုနိုင်သည် အရပ်(၅)ပေ (၈)လက်မ လောက်ရှိပြီး သူ၏ကိုယ်လုံးမှာ အရပ်နှင့်လျှော်ညီစွာတောင့်တင်းသန်စွမ်း၏။ယောက်ျားပီသသော ရုပ်ရည်ရှိပြီး ခင်မင်စရာကောင်းလှ၏။ ဒေါ်ခင်ခင်သူလည်း ကလေးတစ်ယောက် မွေးဖူးသော အသက်(၃၆)နှစ်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း ကောင်းကောင်းနေ ကောင်းကောင်းစားပြီး နေ့စဉ်ပင် မအားလပ်သည့်ကြားမှ မှန်မှန်ပင် လေ့ကျင့်ခန်း ယူခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်၍ မသိသူများက ဒေါ်ခင်ခင်သူကို အသက်(၃၀)လောက်ပင် ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် သူ၏သမီးဖြစ်သူ မေသူဟန်နှင့်အတူ ယှဉ်တွဲ၍ပါလာပါက သူမတို့နှစ်ယောက်ကို ညီအစ်မဟုပင် ထင်မှတ်ရလေအောင် ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် နုပျိုလှသည်။ အောင်ကိုနိုင်၏လီးကြီးကို ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် သန့်စင်သွားပြီးသောအခါတွင် သေချာစွာကိုင်၍ ကြည့်လိုက်လေသည်။အောင်ကိုနိုင်၏လီးကြီးသည် အရှည်(၇)လက်မနှင့်လုံးပတ်မှာ ကျပ်လုံးသာသာခန့် ရှိလေသည်။
ညိုမဲ၍နေသော လီးတန်ကြီးပတ်လည်တွင် အကြောများဖုထစ်၍ အပြိုင်းပြိုင်းထနေသည်။ လီးတန်ကြီးထိပ်တွင် ထိပ်ဖူးလေးမှာလည်း အဖျားလေးပေါ်ရုံလောက်သာ ပြဲလျှရှိသည်။ လီးတန်ကြီး၏အရင်းတွင် အမွှေးနက်နက်လေးများမှာ ခပ်စိတ်စိတ်လေး ပေါက်လျှက်ရှိသည်။ လီးတန်ကြီး၏အောက်ဖက်တွင်တော့ ဂွေးဥကြီးများမှာ လုံးတစ်၍မဲတာနေသည်။ သူ၏လီးကြီးကို သေချာစွာဂရုစိုက်၍ကြည့်နေသော ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် သူမ၏ခြောက်သွေ့၍လာသော နှုတ်ခမ်းလေးများကို သူမ၏လျှာဖျားလေးကိုထုတ်၍ တစ်ချက်နှစ်ချက်ပွတ်လိုက်သည်။ ပြီးသည်နှင့် လက်တဖက်ဖြင့် အောင်ကိုနိုင်၏လီးတန်ကြီးကို ဆွဲကိုင်ကာ ဆုတ်နယ်ဖြစ်ညှစ်ပေး၏။ ပုဆိုးလေးဖြင့် သူမ၏စောက်ပတ်နှင့် ပေါင်ခြံများကို သုတ်ကာသန့်စင်ပေးနေ၏။
သူမ၏ စောက်ပတ်အုံတစ်ခုလုံးနှင့် ပေါင်ခြံနှစ်ဖက်တို့တစ်ဝိုက်တွင် အရည်များ သန့်စင်သွားပြီဆိုသော အခါတွင်မှ သူမသည် လက်အတွင်းမှပုဆိုးကို ကုတင်ခြေရင်းဘက်တွင် ထားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ အောင်ကိုနိုင်၏ဂွေးဥကြီးကို သူမလက်ဖဝါးအတွင်းထည့်၍ ဖွဖွလေးဆုတ်နယ်ပေး၍ နေသည်။ ကျန်လက်တဖက်ကလည်း အောင်ကိုနိုင်၏လီးတန်ကြီးကို ကိုင်လျှက် ပွတ်၍နေ၏။ ခဏမျှအကြာတွင် ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် အောင်ကိုနိုင်၏ လီးတန်ကြီးဆီသို့ သူမ၏ မျက်နှာကိုအပ်ကာ သူမ၏နှုတ်ခမ်းလေးများဖြင့် တဆတ်ဆတ်ဖြစ်၍နေသော လီးတန်ကြီး၏ထိပ်ဖူးကြီးကို ဖိကပ်၍ တစ်ချက်နမ်းလိုက်သည်။လီးတန်ကြီးကို ဆုတ်ကိုင်ထားသော သူမ၏လက်ကလည်း အောင်ကိုနိုင်၏လီးတန်ကြီးကို အားပါးတရ တစ်ချက်မျှဖိကာ ဖျစ်ညှစ်ပြီး ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် သူမ၏ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးကို နောက်သိုလှည့်ကာ အောင်ကိုနိုင်အား ကျောခိုင်းလျှက် ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်သည်။ပြီးတော့ သူမ၏လက်နှစ်ဖက်ကို ရှေ့သို့ဆန့်တန်းကာ သူမ၏ဖင်သားကြီးများကို မြောက်ကြွလျက် ခါးကိုညွတ်ပြီး ဆန့်တန်းထားသော သူမ၏လက်နှစ်ဖက်ကို အိပ်ယာပေါ်သို့ ထောင်လိုက်ကာ အောင်ကိုနိုင်၏ ရှေ့နားတွင် ဖင်ကုန်းပေးလိုက်တော့သည်။
နဂိုကထဲမှ လုံးတစ်ကားစွင့်၍နေသော သူမ၏ဖင်သားကြီးများမှာ ကုန်းလိုက်သဖြင့် ပို၍ကားစွင့်သွားကာ ဖင်သားကြီးများမှာ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးဖြင့် အားရစရာကောင်းလှ၏။ ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဖင်သားကြီးနှစ်ခု၏ အလယ်တည့်တည့်အောက်တွင်တော့ ဒေါ်ခင်ခင်သူ စောက်ပတ်ကြီး၏နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုမှာ လက်တလုံးသာသာ လက်နှစ်လုံးနီးပါးမျှ ညိုမဲကာ နောက်သိုပ ထွက်၍နေသည်။သူမ၏ စောက်မွှေးတွန့်လိမ်လိမ် သုံးလေးပင်သည်လည်း မဲနက်ကောက်ကွေးလျှက် နောက်ဖက်သို့ထွက်၍နေသည်။ အောင်ကိုနိုင်သည် ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ဖင်ကြီးနားသို့တိုးကပ်သွားပြီး သူမ၏ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ဖင်သားကြီးနှစ်ခုကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်နယ်၏။ပြီးတော့ သူ၏မျက်နှာကို ဖင်သားဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးများ တွင် အပ်ကာသူ၏နှာခေါင်းဖြင့် ဖင်သားကြီးများကို ဖိကာဖိကာဖြင့် မက်မောစွာနမ်းလိုက်လေသည်။
ပြီးသည်နှင့် အောင်ကိုနိုင်သည် ဒူးထောက်လိုက်ပြီးလက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူ၏လီးတန်ကြီးကို ကိုင်ကာ ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏နောက်ဘက်တွင် စူ၍ထွက်နေသော စောက်ပတ်ကြီး၏နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုကြားသို့ လီးတန်ကြီးထိပ်ဖျားကို လက်တဆစ်မျှဝင်အောင် ဖိသွင်းလိုက်၏။ပြီးသည်နှင့် သူ၏လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ခါးလေးကို ဆွဲ၍ကိုင်ကာ လီးကြီးကိုဖိ၍ သူမ၏စောက်ပတ်ကြီးထဲသို့ ဆောင့်၍သွင်းလိုက်တော့သည်။ “…ဗြီ…..ဗြီ…..ဗြိ….ဖွတ်…..” “အ….အင်…..အား…..အ……ကျွတ်……ကျွတ်…..” ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ခေါင်းမှာနောက်သို့ လန်သွားပြီး သူမ၏မျက်တောင်များမှာ စင်း၍ကျသွားတော့၏။အောင်ကိုနိုင်ကတော့ စောက်ပတ်ကြီးထဲသို့ သူ၏လီးကြီးတဆုံးဝင်သွားသည်နှင့် ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ခပ်သွက်သွက်ပင် ပြန်၍ဆွဲထုတ်ကာ တစ်ခါပြန်၍ဆွဲထုတ်ကာ တစ်ခါပြန်၍ ဆောင့်သွင်းလိုက်ရင်း အားမနာတမ်း ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ လိုးတော့လေသည်။
အောင်ကိုနိုင်သည် နောက်မှဆောင့်၍လိုးလိုက်တိုင်း ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ကြီးမားလုံးတစ်၍နေသော ဖင်သားကြီးများမှာ တုန်ကနဲ တုန်ကနဲ ဖြစ်၍သွားရသည်။ထို့ပြင် သူမ၏ဦးခေါင်းလေးမှာလည်း နောက်သို့လန်၍ လန်၍ သွားရသည်။ အောင်ကိုနိုင်၏ဆောင့်ချက်များသည် လေးဘက်ထောက်ကာ ဖင်ကုန်း၍အလိုးခံနေသော ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ ကိုယ်လုံးကို တုန်၍တုန်၍သွားစေခဲ့ပြီး သူမ၏အောက်တွင်တွဲလောင်းဖြစ်နေသည့် နို့ကြီးများမှာ ခါရမ်း၍နေတော့၏။ ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် သူမ၏နောက်မှနေ၍လိုးပေးနေသော အောင်ကိုနိုင်၏ဆောင့်ချက်များအတိုင်း သူမ၏ ဖြူဖြူဖွေးဖွေးဖင်သားကြီးများကို နောက်ပြန်ကော့၍ကော့၍ ပေးကာ အားပါးတရ အလိုးခံနေတော့သည်။
“….ဖွတ်….ပလွတ်…..” “……အ……မောင်…..မောင်လေး…….လီး ….လီးကို အပေါ်ကို ကော်ပြီး ဆောင့်စမ်းပါ…..အ….” အလိုးမကျွမ်းကျင်သေးသော အောင်ကိုနိုင်ကို ဒေါ်ခင်ခင်သူက သူမ၏စောက်ပတ်အတွင်းသားများနှင့် လီးကြီးကို ထိထိမိမိဖြစ်စေရန် သင်ပြပေးရင်း အလိုးခံနေ၏။မမ……ကောင်းလားဟင်……အ…..အား……ကောင်း…..ကောင်း..တယ်……အင့်…”အင့်……….လီးကို အောက်ကို စိုက်ဆောင့်ပေးပါ……အင့်……အ …” ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် သူမ၏ဖင်ကြီးများကို နောက်ပြန်ကော့ပေး၍ အောင်ကိုနိုင်ကို အမျိုးမျိုး လိုးခိုင်းနေသည့်အပြင် တစ်ချက် တစ်ချက်မှာလည်း သူမ၏ဖင်ကြီးကို လှုပ်ရှား၍ စကောဝိုင်းလေးလုပ်ပေး နေသေး၏။သူမပြောသလိုပင် အောင်ကိုနိုင်ကလည်း လိုးပေးနေသဖြင့် ထိထိမိမိဖြစ်ကာ နှစ်ယောက်စလုံး အရသာတွေ့နေကြ၏။ အောင်ကိုနိုင်သည် ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ နောက်မှဆောင့်၍လိုးနေရင်း သူမ၏လုံးတစ်ဖြူဖွေး၍နေသော ဖင်သားကြီးများကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အားမလိုအားမရ ဆုတ်နယ်ကာ ပေးလိုက်သေး၏။ အကင်းပါးသော အောင်ကိုနိုင်သည် သူ၏လီးကြီးကို ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏စောက်ပတ်ထဲသို့ တည့်တည့်လိုးလိုက်၊ အပေါ်သို့လီးကို ကော်၍လိုးလိုက်၊အောက်သို့စိုက်ကာ ဖိဆောင့်၍ လိုးလိုက်ဖြင့် အားမာန်နှင့် ပြစ်လိုးဆောင့်၍နေသည်။
အောင်ကိုနိုင်၏တတ်ကျွမ်းလာသော လိုးဆောင့်ချက်များကြောင့် ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ စောက်ပတ်ထဲတွင် အရသာများ ကောင်းသထက် ကောင်းလာပြီးဖြစ်သဖြင့် သူမ၏ ဆန့်တန်းထားသော လက်နှစ်ဖက်ကို တစ်တောင်ဆစ်မှနေ၍ ကွေး၍ချကာ တံတောင်ဆစ်နှစ်ဖက်ကို အားပြု၍ ထောက်ထားလိုက်တော့သည်။ ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် သူမ၏ကိုယ်အရှေ့ပိုင်းကို နိမ့်ချ၍ တံတောင်ဆစ်ကို ထောက်ကာအာြး့ပုလိုက်သဖြင့် သူမ၏ဖင်သားကြီးများကို ပို၍အယ်ကာ လုံးတစ်၍လာခဲ့ရပြီး သူမသည် ဖင်ဗူးထောင်း ထောင်ပေးသကဲ့သို့ ဖြစ်ကာ သူမ၏စောက်ပတ်ကြီးမှာလည်း ကော့၍တက်လာတော့၏။ ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ ကော့၍တက်လာသော စောက်ပတ်ကြီးနှင့်အတူ ကုန်း၍ထားသဖြင့် စောက်ပတ်ကြီးထိပ်မှ စောက်စေ့လေးသည်လည်း တစ်ပါတည်းနောက်သို့ထွက်ကာ မော့၍ကော့တက်လာသော စောက်ပတ်ထဲသို့ ဆောင့်၍လိုးနေသော အောင်ကိုနိုင်၏လီးကြီးသည် အောက်ဖက်နှင့် တစ်ချက်တစ်ချက်ဖိ၍ ပွတ်၍ပွတ်၍ သွားခဲ့ရသဖြင့် ဒေါ်ခင်ခင်သူမှာ အရသာများရှိလွန်းမက ရှိလာ၍ သူမ၏အောက် နှုတ်ခမ်းလေးကိုပင် အားတင်းကာ ကိုက်ထားရသည်အထိဖြစ်ရသည်။
“……ဖွတ်……ဗြွတ်……ဗြွတ်……” အောင်ကိုနိုင်မှာလည်း ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ရက်ရောစွာအပေးကောင်းမှုကြောင့် သူ၏လီးကြီးမှာ ထိထိမိမိဖြင့် ရှိလာကာ အရသာများရှိသထက်ရှိလာပြီဖြစ်၍ အောင်ကိုနိုင်သည် ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ ခါးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဆွဲကိုင်ကာ အားကုန်ထုတ်၍ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် လိုး၍နေတော့သည်။ .အင်း……ဟင်း……ကျွတ်……ကောင်းလိုက်တာနော်……ဆောင့်…..ဆောင့်…..အ…….မောင်…..မောင်လေး…..မ..မ….ပြီးချင်လာပြီ……အ……အား….အ ……ဆောင့်ပေးပါ…..အင်း…..ဆောင့်ပေးမယ်…မ…..မ……အား…” ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးမှာ တသိမ့်သိမ့်တုန်၍သွားပြီး သူမ၏ဖင်သားကြီးများမှာလည်း နောက်သို့ ကော့ကနဲ ကော့ကနဲ ဖြစ်၍သွားသည်။အောင်ကိုနိုင်မှာလည်း သူ၏ကိုယ်လုံးမှာ ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တွန့်၍သွားတော့၏။
ပြီးသည်နှင့် ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် ကုတင်ပေါ်ရှိ အိပ်ယာပေါ်သို့ မှောက်ကျသွားရသကဲ့သို့ အောင်ကိုနိုင်သည်လည်း ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ကိုယ်လုံးကိုလှမ်း၍ ဖက်လိုက်ရင်း ဒေါ်ခင်ခင်သူနှင့်အတူ သူမ၏ကျောမှာကပ်လျက်သားပင် မှောက်ရက်သားလေးလိုက်ပါကာ ကျသွားရတော့၏။ ဒီတစ်ညတော့ ဒေါ်ခင်ခင်သူသည် အောင်ကိုနိုင်၏ကုတင်တွင်ပင် အိပ်ဖြစ်ခဲ့၏။နောက်ညများတွင်တော့ အောင်ကိုနိုင်ကို သူမ၏အခန်းသို့ ခေါ်၍အိပ်စက်ခဲ့၏။ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏သမီးဖြစ်သူ မေသူဟန်မသိအောင် အတန်တန်သတိထား၍နေခဲ့ကြရ၏။မေသူဟန်ကလည်း အောင်ကိုနိုင်ကို ကြည့်၍မရ။ အကြောင်းကတော့ မေသူဟန်သည် သူမလိုလှပသော သူကို အောင်ကိုနိုင်က ဒီအိမ်စရောက်လာကတည်းက မသိကျေးကျွန်ပြုနေသဖြင့် မကြေနပ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
အခုလဲကြည့် မေသူဟန် တစ်ယောက် အိမ်ရှေ့ ထွက်လာတော့ အောင်ကိုနိုင်က ဆက်တီကုလားထိုင်တွင်ထိုင်ကာ အမိန့်သား သတင်းစာဖတ်၍နေသည်။ အင်း………..အိမ်တွင်လည်း မာမီမရှိ၍ အတော်ဖြစ်၍နေ၏။မေသူ၏အမေ ဒေါ်ခင်ခင်သူမှာ နယ်ရှိလုပ်ငန်းခွင်များသို့ ခရီးထွက်သွားခဲ့သည်မှာ ဒီနေ့ဆိုလျှင်(၃)ရက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်လည်း (၃-၄) ရက်ခန့်ကြာမှ ပြန်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ မေသူသည် အောင်ကိုနိုင်ထိုင်၍နေသော ဆိုဖာဆက်တီကုလားထိုင်ဘေးသို့ ရောက်အောင်သွားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ အောင်ကိုနိုင်၏ ရှေ့တွင် ရှိသော ဆက်တီစားပွဲအောက်မှ သတင်းစာနှင့်မဂ္ဂဇင်းများကို ဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့ လုပ်ပြီး တစ်ခုခုရှာသလိုလုပ်နေသည်။ ပြီးတော့ သူမသည်အောင်ကိုနိုင် ထိုင်နေသော ဆိုဖာဆက်တီ ကုလားထိုင်နှင့် စားပွဲအကြားသို့ သူမ၏ ခြေထောက်လေးတစ်ဖက်ကို လှမ်း၍တင်လိုက်သည်။ထိုအခါတွင် အောင်ကိုနိုင်၏ခြေထောက်တစ်ဖက်နှင့် သူမ၏ ခြေထောက်လေးတို့မှာ ထိကပ်မိကြ၏။
ပြီးသည်နှင့် မေသူသည် အောင်ကိုနိုင် ရှေ့ရှိစားပွဲလေး၏ အောက်ဖက်သို့ သူမ၏ခါးကိုကုန်းကာ ငုံ့၍ ကြည့်လိုက်သည်။သူမ၏စွင့်ကားလှသော ဖင်သားလုံးလုံးတစ်တစ်ကြီးမှာ အောင်ကိုနိုင်၏ မျက်နှာရှေ့တွင် (၆)လက်မလောက်ပင် မကွာချင်တော့ပါ။သူမ၏ ဖင်သားကြီးတစ်ဖက်၏ ဘေးစောင်းက သတင်းစာကို ကိုင်၍ထားသော အောင်ကိုနိုင်၏ လက်တစ်ဖက်ကို ဖိ၍ထိနေသေး၏။ အောင်ကိုနိုင်သည် သူ၏လက်ကို မရုတ်သိမ်းသည့်အပြင် မေသူ၏ဖင်သားကြီးကို မသိမသာပင် ဖိကပ်ပေးလိုက်သေးသည်။ ဒေါ်ခင်ခင်သူ၏ သင်ပြစည်းရုံးမှုကြောင့် ရဲတင်းနေသော အောင်ကိုနိုင်သည် မိန်းမတို့၏အရသာကိုလည်း သိနေသည့်အပြင် ဒေါ်ခင်ခင်သူမှာလည်း ခရီးထွက်သွားသည်မှာ (၃)ရက်ခန့်ကြာပြီဖြစ်၍ သူ၏သွေးသားများမှာ သစ်လွင်လန်းဆန်း၍ နေပြီးတက်ကြွနေ၏။ ယခုသည်ပင် သူ၏ပုဆိုးအတွင်းမှ လီးကြီးမှာ မာတောင်၍ လာနေပြီဖြစ်သည်။
မေသူသည် သူမ၏ခါးလေးကို ကုန်း၍ဆက်တီစားပွဲအောက်ဆင့်တွင် ဟိုရှာဒီရှာဖြင့် ခပ်ကြာကြာလေး လုပ်နေပြီးမှ သူ၏ခါးကိုပြန်ဆန့်လိုက်သည်။ မခံချင်စိတ်နှင့်သာ မူယာမာယာဖြင့် ထင်ရာလုပ်နေခဲ့ရပေမယ့် မေသူ၏အသဲနုနလေးကတော့ တလှပ်လှပ်ခံစားရကာ သူမ၏လက်ဖျားလေးများပင် အေးစက်၍နေရ၏။ မေသူသည် သူမ၏ခါးလေးကို ပြန်ဆန့်ကာ သူမ၏ခြေထောက်လေးကို လှမ်း၍လှည့်အထွက်တွင် အယောင်ယောင် အမှားမှားဖြင့် သူမ၏ခြေထောက်လေးသည် ဘာကိုသွား၍တိုက်သည်မသိ။ သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးမှာ အတော်လေးယိုင်အသွားတွင် သူမ၏နောက်ဘက်တွင်ထိုင်၍နေသော အောင်ကိုနိုင်က သူ၏လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို လှမ်း၍ဆွဲကာ ထိန်းလိုက်သဖြင့် အတော်လေး ယိုင်နဲ့သွားသော မေသူ၏ကိုယ်လုံးလေးသည် အောင်ကိုနိုင်၏ပေါင်နှစ်ဖက်ပေါ်သို့ ’ဘုန်း” ဆိုလဲပြိုကျသွားတော့သည်။
အောင်ကိုနိုင်ကသူ၏ ရင်ခွင်အတွင်းသို့ လဲပြို၍ကျလာသော မေသူ၏ကိုယ်လုံးလေးကို သူ၏လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သိမ်းကြုံး၍ဖက်ထားလိုက်သည်။နွေးထွေးအိစက်ညက်ညောသော မေသူ့ကိုယ်လုံးလေး၏ အထိအတွေ့က အောင်ကိုနိုင်၏ကိုယ်ပေါ်မှသည် အသွေးအသားထဲထိ စိမ့်၍ဝင်သွားတော့လေသည်။ မေသူသည်လည်း တစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်းဖိန်း၍သွားခဲ့ရပြီး သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးသည် တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြစ်နေ၏။ သို့ရာတွင် အောင်ကိုနိုင်၏ရင်ခွင်အတွင်းမှ ရုန်း၍မထွက်မီခဲ့ပါ။ “…..မေသူ…..” “….ရှင်……” “…..ဘာဖြစ်သွားသေးလဲ….ဟင်….” “……ဟင့်…..အင်း……” “…….လန့်သွားမှာပေါ့နော်…….” “……အင်း…….ဟုတ်……” အောင်ကိုနိုင်က သူမ၏နားလေးနားသို့ သူ၏နှုတ်ခမ်းလေးကိုကပ်ကာ မေသူ၏နားဖျားလေးကို သူ၏နှုတ်ခမ်းဖျားလေးဖြင့် မထိတထိလေးလုပ်လျှက် နှစ်ကိုယ်ကြားလေသံလေးဖြင့် ပြောလိုက်သည်။
မေသူကလည်း သူမ၏ဦးခေါင်းလေးကို ခပ်ငုံ့ငုံ့လေးလုပ်ကာ လေသံသဲ့သဲ့လေးဖြင့်ပြန်ပြောသည်။ စကားပြောရင်းဖြင့် မေသူသည် သတိပြုမိတာကတော့ သူမ၏ဖင်သားကြီးနှစ်ခု အလယ်လောက်ကို အောက်ဖက်မှလာ၍ ထောက်မိနေသော မာတောင်နေသည့်ရှည်မျောမျောအရာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာမှာ မေသူ၏ဖင်သားကြီးများ၏ဖိအားကြောင့် တဒိတ်ဒိတ်ပင်ဖြစ်နေကြောင်း သူမ၏ဖင်သားကြီးများက ထိတွေ့သိရှိလိုက်ရသည်။ စောစောက ပန်းနုရောင်ပြေးနေသည့် သူမ၏မျက်နှာလေးမှာ နီမြန်း၍ သွားရတော့သည်။ မေသူသည် ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့် ကြုံး၍ထသဖြင့် အောင်ကိုနိုင်က သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ဖက်၍ထားသော လက်နှစ်ဖက်ကို ဖယ်၍ပေးလိုက်သည်။
မေသူသည် အောင်ကိုနိုင်၏ရင်ခွင်အတွင်းမှ ထကာအိမ်ရှေ့တံခါးဝသို့ ထွက်၍သွားသည်။ပြီးလျှင် သူမသည် အိမ်အပြင်သို့ထွက်ရန် ခြေလှမ်းလိုက်သည်။ “……မေသူ……” “……ရှင်…….” အောင်ကိုနိုင်မှာ ထိုင်ရာမှထကာ အိမ်ရှေ့တံခါးဝသို့လျှောက်လာပြီး တံခါးဝအရောက်တွင် ရပ်လိုက်သည်။ မေသူကလည်း သူမ၏ဦးခေါင်းလေးကိုငုံ့လျှက် တံခါးဝ၏ရှေ့ဖက်နားတွင် ခပ်ပေပေလေးရပ်၍နေသည်။ သူမ၏ မျက်နှာလေးမှာတော့ နီရောင်လေးဖြစ်နေသေးသည်။ “…….မေသူ…….ဟိုဘက်အိမ်သွားမလို့လား…..” “…..အင်း…….ယဉ်မျိုးခင်ဆီသွားမလို့လေ……” “……သိပ်ပြီး မိုးမချုပ်စေနဲ့နော်……” “…..အင်း…ပါ……” “…….ကို…..အိမ်ရှေ့မှာထိုင်ပြီး……စောင့်ပေးနေပါမယ့်……” ငုံ့၍ထားသော မေသူ၏ဦးခေါင်းလေးမှာ မော့၍လာပြီး သူမ၏အရည်လေးများလဲ့နေသော မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးများဖြင့် ဝင့်ကာ တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။ပြီးတော့ သူမ၏ ဦးခေါင်းလေးကို တစ်ချက်ဆတ်ပြပြီး ခေါင်းလေးကိုပြန်၍ငုံ့ကာ လျှောက်လှမ်းသွားတော့သည်။
ခြံဝသို့ရောက်သောအခါတွင်တော့ မေသူသည်ခြံတံခါးကိုဖွင့်၍ ထွက်လာလိုက်ပြီး သူမကိုယ်လုံးလေးကို နောက်ဖက်သို့ပြန်လှည့်ကာ ခြံတံခါးကို ပိတ်လိုက်သည်။ထိုအခါတွင် အိမ်ရှေ့တံခါးဝမှရပ်၍ သူမကို ကြည့်နေသော အောင်ကိုနိုင်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရ၍ သူမသည်ခပ်တွေတွေလေးရပ်ကာ ခေတ္တမျှကြည့်နေလိုက်ပြီး ဆက်၍ထွက်ခဲ့တော့၏။ အိမ်ရှေ့တံခါးတွင် ရပ်၍ကြည့်နေသောအောင်ကိုနိုင်သည်လည်း သူ၏မြင်ကွင်းထဲမှ မေသူ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မှ အိမ်ရှေ့တံခါးကိုပိတ်လိုက်ပြီး ဧည့်ခန်းအတွင်းသို့ ပြန်၍လျှောက်လာကာ မူလထိုင်ခဲ့သည့် ဆက်တီဆိုဖာကုလားထိုင်ပေါ်သို့ ခြေပစ်လက်ပစ်ချလိုက်ပြီး သက်ပြင်းတစ်ချက် မှုတ်၍ထုတ်လိုက်တော့သည်။
မေသူတစ်ယောက် ယဉ်မျိုးခင်တို့၏ အိမ်သို့ရောက်တော့ အိမ်တွင် ယဉ်မျိုးခင်တစ်ယောက်တည်းသာရှိပြီး သူမသည်ဆင်ဆာမဲ့တင်သွင်းထားသည့် စီဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည့်၍နေသည်။မေသူ ရောက်လာသဖြင့် သူမတို့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်သည် ဆက်၍ဇာတ်ကားကိုကြည့်ကြသည်။ဇာတ်ကားမှာ ပြီးဆုံးကာနီးပြီဖြစ်၍ ဇာတ်ဝင်ခန်းများမှာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖြစ်၍လာ၏။ စောစောကတည်းက တစ်ကိုယ်လုံး ဖိန်းရှိန်းကာ ကိုယ်အတွင်းရှိ သွေးသားများ ထကြွဆူပွက်ခဲ့ရသော မေသူသည် ဘလူးဇာတ်ဝင်ခန်းများကို ကြည့်ရင်းဖြင့်သူမ၏သွေးသားတို့သည် ပွက်ပွက်ဆူကာ ထလာခဲ့ရတော့၏။ ဇာတ်လမ်းပြီးဆုံးသွားချိန်မှာတော့ မေသူ၏သွေးသားတို့သည် ပေါက်ကွဲခဲ့ရချေပြီ။ ဇာာတ်လမ်းပြီးဆုံးသွားသည်နှင့် မေသူသည်နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ည(၉)နာရီပင် ရှိပြီဖြစ်၍သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ယဉ်မျိုးခင်ကို နှုတ်ဆက်၍ အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။
အိမ်ရှေ့တံခါးဝသို့ ရောက်သည်နှင့် ဧည့်ခန်းထဲတွင် ထိုင်၍နေသော အောင်ကိုနိုင်မှာ ထလာ၍ တံခါးဖွင့်ပေး၏။ “……မေသူ…….ပြန်လာပြီလား…..” “…….ဟုတ်ကဲ့…….” မေသူသည် အိမ်ရှေ့တံခါးကို ပိတ်၍နေသော အောင်ကိုနိုင်ကို ရပ်၍စောင့်နေ၏။အောင်ကိုနိုင်က တံခါးပိတ်ပြီး လှဲ့၍လာသောအခါတွင်မှ သူမလည်း အောင်ကိုနိုင်နှင့်အတူ အိမ်အတွင်းသို့ ဝင်၍လာခဲ့၏။မာမီဆီက……ဖုန်းလာသေးလား…..” “……လာတယ်…..မေသူ……နောက်(၃)ရက်လောက်နေမှ ပြန်လာဖြစ်မယ်တဲ့……” “……..အော်…….အင်း…….အင်း…….” မေသူ၏အသံလေးများမှာ အက်တက်တက်လေးဖြစ်နေ၍ သူမ၏အာခေါင်လေးများ ခြောက်သွေ့နေသည်ကို အောင်ကိုနိုင်က သတိပြုမိလိုက်သည်။
အအေးသောက်ဦးမလား……မေသူ…….” “…….ဟင့်အင်း……အိပ်တော့မယ်……” ပြောပြောဆိုဆို မေသူသည် အိပ်ခန်းအတွင်းဖက်သို့ဝင်ကာ သူမ၏အိပ်ခန်းအတွင်းသို့ဝင်၍ သွားတော့၏။ မေသူသည် သူမ၏အိပ်ခန်းရှေ့သို့ရောက်လျှင် စေ့၍ထားသော သူမ၏အိပ်ခန်းတံခါးကိုဖွင့်၍ ဝင်လိုက်သည်။ပြီးသည်နှင့် သူမသည် သူမအိပ်စက်ရာ ကုတင်ဆီသို့သွားပြီး ကုတင်ထက်ရှိမွေ့ယာပေါ်သို့ ခြေပစ်လက်ပစ် လှဲချ၍အိပ်လိုက်သည်။ သူမသည် အိပ်ယာထက်တွင် ပက်လက်ကလေးလှန်ကာ မျက်လုံးလေးများ ပိတ်ာထားသော်လည်း ယဉ်မျိုးခင်တို့အိမ်တွင် စောစောက ကြည့်ခဲ့ရသောဇာတ်ကားထဲမှ ဇာတ်ဝင်ခန်းများမှာ သူမ၏အာရုံထဲတွင် တဝဲလည်လည်ဖြစ်၍နေသည်။ အထူးသဖြင့် ဇာတ်လမ်းထဲမှ မင်းသားဖြစ်သူ၏ကြီးမားတုတ်ခိုင်၍ ပြဲလန်နေသော လီးကြီးမှာ သူမ၏အာရုံထဲမှ ဖျောက်၍မရ။ထိုလီးကြီးကို မင်းသမိးက အားရပါးရ စုပ်နေပုံ. မင်းသမီး၏စောက်ပတ်ကြီးထဲသို့ အရည်တရွှဲရွှဲဖြင့် ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေပုံနှင့် ထိုလီးကြီးမှ သုတ်ရည်များ ပြွတ်ကနဲပြွတ်ကနဲ ထွက်နေပုံတို့မှာ မေသူ့ကို ဒုက္ခအပေးဆုံးဖြစ်၏။
မေသူသည် အိပ်ယာထက်တွင် ဘယ်လူးညာလှိမ့်ဖြင့် အမျိုးအမည်မသိသော ဝေဒနာကို ပြင်းထန်စွာဖြင့် မချိတင်ကဲ ခံစားနေရ၏။(၁၅)မိနစ်လောက်ကြာမှ မေသူသည် အိပ်ယာပေါ်မှ လူးလဲထလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှဆင်းလိုက်၏။ ပြီးတော့ သူမ၏အင်္ကျီနှင့်ဘရာစီယာတို့ကိုချွတ်လိုက်ပြီး တန်းပေါ်သို့တင်လိုက်ကာ သူမ၏ခါးမှ ထဘီလေးကိုရင်လျားလိုက်သည်။ပြီးလျှင် အိပ်ခန်းအတွင်းတွင် ဖွင့်၍ထားသော မီးချောင်းကိုပိတ်၍ ညအိပ်မီးလုံးလေးကိုဖွင့်ကာ ညဝတ်အင်္ကျီကိုပင် မဝတ်တော့ဘဲ ထဘီရင်လျားလေးနှင့် သူမ၏အိပ်ယာထက်သို့ ပက်လက်လေး ပြန်လှဲချလိုက်တော့သည်။ အိပ်ယာထက်တွင် မေသူသည် လူးကာလှိမ့်ကာဖြင့် (၅)မိနစ်လောက်နေပြီးသောအခါတွင်မှ သူမသည် ပက်လက်ကလေးလှန်ကာ သူမ၏လက်ကလေးတစ်ဖက်ဖြင့် သူမ၏စောက်ဖုတ်လေးကို ထဘီပေါ်မှ စမ်းလိုက်၏။
သူမ၏စောက်ဖုတ်လေးမှာ ဖောင်းကားတင်း၍နေသည်။ခံစားနေရသော ဝေဒနာကို သက်သာလိုသက်သာငြားဖြင့် သူမသည် သူမ၏စောက်ဖုတ်လေးကို ထဘီပေါ်မှပင် ပွတ်၍ပေးနေသည်။ ခဏအကြာတွင်တော့ သူမခံစားနေရသော ဝေဒနာမှာ သက်သာ၍ မသွားသည့်အပြင် ပို၍ပင်ဆိုးလာသဖြင့် မေသူသည် သူမ၏ထဘီလေးကို ခါးဆီသို့လှန်၍တင်လိုက်ရာ သူမ၏ဖြူဖွေးညက်ညော နေသည့်သူမ၏ ကိုယ်အောက်ပိုင်းလေးနှင့်အတူ ဖြူဖွေးမို့ဖောင်း၍အမွှေးနက်တိုတိုလေးများ ခပ်စိတ်စိတ်ပေါက်နေသည့် သူမ၏စောက်ဖုတ်လေးသည် ထမီအောက်မှထွက်ပေါ်၍ လာခဲ့ရတော့၏။ ပြီးသည်နှင့် သူမသည် စောက်ဖုတ်လေးကို သူမ၏လက်ဖြင့် ပွတ်၍ပေးနေမိသည်။နီနီရဲရဲလေးဖြစ်နေသော သူမ၏စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားလေး နှစ်ခုတို့ ဆုံဆည်းရာ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးတွင် သူမ၏ စောက်ရည်လေးများမှာ စိမ့်ထွက်နေကြပြီး နီတာရဲစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို ရီးလေးခိုလျှက် ရှိတော့၏။
မေသူသည် သူမ၏စောက်ပတ်လေးကို ပွတ်ပေးနေရာမှ သူမခံစားနေရသော ဝေဒနာကိုဆက်၍ မခံစားနိုင်တော့သဖြင့် လက်လေးတစ်ဖက်ဖြင့် သူမ၏စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးနှစ်ခုကို အသာလေးဖြဲကာ ကျန်လက်တစ်ဖက်၏ စောက်ပတ်ဝကို ကလိပေးနေသည်။ ထိုအချိန်တွင် အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းထဲမှ သူ၏အိပ်ခန်းဆီသို့ ဝင်၍လာသော အောင်ကိုနိုင်သည် မေသူဟန်၏ အိပ်ခန်းရှေ့သို့အရောက်တွင် သူမ၏ အိပ်ခန်းတံခါးမှာ ခပ်ဟဟလေးဖြစ်နေသဖြင့် အိပ်ခန်းအတွင်းသို့ ချောင်း၍ကြည့်လိုက်မိသည်။ အိပ်ခန်းတံခါးဝနှင့် ခြောက်ပေမျှသာဝေးသောကုတင်ပေါ်ရှိ မေသူ၏အဖြစ်ကို သူသည်တွေ့မြင် လိုက်ရတော့သည်။ အောင်ကိုနိုင်ကြည့်နေစဉ်မှာပင် မေသူသည် သူ၏လက်ညှိုးထိပ်လေးဖြင့် သူမ၏စောက်ပတ်ဝကို ကလိပေးနေရာမှ စောက်ပတ်ထဲသို့ သူ၏လက်ညှိုးကို ဖြေးဖြေးချင်းသွင်း၍ နေသည်။
သူမ၏ပေါင်နှစ်ဖက်လုံးမှာ ခပ်ကားကားလေး ထောင်ထားပြီး သူမ၏ ခါးလေးကိုလည်း နဲနဲကော့ထားသည်။ အိပ်ခန်းဝတွင် ရပ်လျှက် ကြည့်၍နေသော အောင်ကိုနိုင်၏ ပုဆိုးအတွင်းမှ လီးကြီးသည်လည်း မာတောင်၍ လာခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။ ခဏမျှအကြာတွင် မေသူသည် သူမ၏စောက်ပတ်အတွင်းမှ လက်နှစ်ဆစ် လောက်သွင်းကာ ဖြေးဖြေးချင်း ပြုလုပ်ပေးနေရာမှ သူမ၏လက်ညိုးကို စောက်ပတ်အတွင်းသို့ ခပ်သွက်သွက်ပင် ထုတ်ချီသွင်းချီ ပြုလုပ်၍လာ၏။သူမ၏ မျက်လုံးလေးများကတော့ မှိတ်ထားလျှက်ရှိကြ၏။ “……..မေသူ…..” “…..မေသူ…..” အောင်ကိုနိုင်သည် အိပ်ခန်းတံခါးနားကပ်၍ အသံခပ်အုပ်အုပ်ဖြင့် ခေါ်လိုက်သည်။ “……မေသူ….” “….အင်……ရှင်…..” “……..ကိုယ်ပါ…….တံခါးဖွင့်ပေးပါဦး…….” “…….အော်……အင်း……လာ…….လာပြီ…….” ခဏအကြာတွင်တော့ မေသူ၏အိပ်ခန်းတံခါးမှာ ပွင့်၍လာပြီး မေသူသည် ထမီရင်လျားလေးဖြင့် မတ်တပ်ရပ်လျက်လေး တွေ့လိုက်ရ၏။
အိပ်ခန်းတံခါးပွင့်သွားသည်နှင့် အောင်ကိုနိုင်သည် အိပ်ခန်းအတွင်းသို့ ဖြတ်ကနဲ လှမ်း၍ဝင်လိုက်ပြီး အခန်းတံခါးကို နောက်ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီး ကြောင်၍ကြည့်နေသော မေသူ၏လက်ဖျားလေးကို သူ၏လက်ဖြင့် လှမ်း၍ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်။သူမ၏ လက်ညိုးလေးတွင် ကပ်စေးစေး လေးဖြစ်နေသည်ကို အောင်ကိုနိုင်၏ လက်မှတဆင့်တွေ့ထိခံစားလိုက်ရ၏။ပြီးသည်နှင့် အောင်ကိုနိုသည် မေသူ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ဆွဲ၍ဖက်လိုက်ပြီး သူမ၏နှုတ်ခမ်းလေးကို သူ၏နှုတ်ခမ်းဇြင့် ဖိကပ်စုပ်နမ်းလိုက်ရာ မေသူသည် သူမ၏ရင်ဘတ်လေးကို ကော့၍ သူမ၏မျက်နှာလေးမှာ မော့၍တက်လာသည်။
ပြီးသည်နှင့် အောင်ကိုနိုင်သည် သူမ၏နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်လျှက်ကပင် မေသူ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို စွေ့ကနဲပွေ့ကာ ကုတင်ရှိရာသို့ လျှောက်လှမ်းသွားပြီး သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို ကုတင်ပေါ်သို့ ပက်လက်ကလေးတင်လိုက်ပြီး သူ၏နှုတ်ခမ်းများကို သူမ၏နှုတ်ခမ်းများမှခွာကာ ခါးဆန့်လိုက်ပြီး အောင်ကိုနိုင်သည် သူ၏အင်္ကျီနှင့်ပုဆိုးတို့ကို ချွတ်ချလိုက်တော့သည်။ပြီးလျှင် အိပ်ယာပေါ်တွင် မျက်လုံးလေးမှိတ်ကာ ပက်လက်ကလေးဖြစ်နေသော မေသူ၏ကိုယ်လုံးလေးပေါ်မှ ရင်လျား၍ထားသော ထမီလေးကို သူမ၏ခြေထောက်တစ်ဖက်သို့ ဆွဲ၍ချွတ်လိုက်ရာ မေသူကလည်း သူမ၏ဖင်သားကြီး များကို ကြွ၍ပေးလိုက်သဖြင့် ထမီလေးမှာ ကွင်းလုံးကျွတ်၍ ထွက်သွားတော့သည်။
ထိုအခါတွင် ဖြူဖွေးနုနယ်၍ ညက်ညောနေသည့် သူမ၏ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးလေးမှာ မက်မောဖွယ်ရာထွက်ပေါ်လာသဖြင့် အောင်ကိုနိုင်သည် ကုတင်ပေါ်သို့တက်လိုက်ပြီး သူမ၏ကိုယ်လုံးလေး ကို ဖက်လိုက်သည်။ ထို့နောက် မေသူ၏ဝင်းမှည့်နေသော နို့လေးများကိုငုံ့၍စို့ပေးလိုက်သည်။မေသူ့ရင်ဘတ်လေးမှာ ကြွတက်လာသည်။အောင်ကိုနိုင်သည် မေသူ့နို့လေးများကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့ပေးနေရင်းမှ လက်တစ်ဖက်ကို မေသူ၏စောက်ဖုတ်ပေါ်သို့ အုပ်၍ပွတ်ပေးနေသည်။အောင်ကိုနိုင်သည် မေသူ၏နို့လေးများကို စို့ပေးနေရင်းမှ သူ၏နို့သီးခေါင်းလေးများကို လျှာဖျားလေးဖြင့်ယက်ကာကလိပေး၏။ စောက်ပတ်လေးကို ပွတ်ပေးနေသော သူ၏လက်ညိုးထိပ်ကလေးသည် မေသူ၏စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးအတွင်းသို့ တိုး၍ဝင်သွားပြီး သူမ၏စောက်စေ့ကလေးကို ကလိပေးနေလိုက်သေးသည်။
အောင်ကိုနိုင်၏လီးကြီးသည်လည်း တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေပြီး လီးကြီးထိပ်တွင်တော့ အရည်များမှာ စိုရွှဲနေပြီဖြစ်သည်။ မေသူသည် အိပ်ယာထက်တွင် ပက်လက်ကလေးနေကာ သူမ၏မျက်လုံးလေး များကိုမှိတ်၍ထားပြီး သူမ၏လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကတော့ သူမ၏ဦးခေါင်းဝဲယာ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီသို့ တံတောင်ဆစ်မှ ကွေးကာတင်ထားပြီး သူမ၏လက်ဖဝါးလေးနှစ်ခုကတော့ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုတ်၍ထားကြ၏။နောက်တော့ အောက်ကိုဆင်းပြီး မေသူ့စောက်ပတ်လေးကို လက်ဝါးလေးနဲ့ ခပ်ဖွဖွလေးအုပ် ကာ ပွတ်ပေးလိုက်၊ ပေါင်တွင်းသားလေးကို ပွတ်ပေးလိုက်နဲ့မို့ မေသူလည်း ရမက်တွေကြွလာပါတယ်။ ပါးစပ်က လည်း ငှက်ဖျားတက်သလို တဟင်းဟင်းနဲ့ ဖြစ်လာပါတယ်။
အောင်ကိုနိုင်လျှာကြီးကလည်း အောက်ကို တဖြည်းဖြည်းဆင်းလာပြီး ချက်နားတစ်ဝိုက် ရစ်ဆွဲပေးလိုက်ရင်း ပေါင်ခြံနားရောက်တော့ စောက်ပတ်ကိုမယက်သေးပဲ ပေါင်တွင်းသားလေးတစ်လျှောက် စုန်ချီဆန်ချီ ယက်တင်ပေး လိုက်ရာ မေသူမှာ ပိုပြီးမရိုးမရွတွေဖြစ်လာကာ အောင်ကိုနိုင့်ခေါင်းကို သူ့စောက်ပတ်နဲ့ တည့်အောင်အတင်းဆွဲကပ် လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့မှ အောင်ကိုနိုင်လည်း မေသူတင်ပါးအောက်ကို ခေါင်းအုံးလေးခံပေးလိုက်ရင်း စအိုဝလေးကနေ စောက်စေ့လေးအထိ တောက်လျှောက် လျှာပြားကြီးနဲ့ သိမ်းယက်ပေးလိုက်ရာ “ ရှီး…လား…လား….လား..ကိုရယ် ” အောင်ကိုနိုင်လည်း အချက်နှစ်ဆယ်လောက် ဆက်တိုက်အပေါ်အောက် ဆွဲပေးလိုက်ရင်း လက်ခလယ်လေးနဲ့ စအိုဝကို မထိတထိလေး ပွတ်လိုက်ရင်း လျှာကိုစောက်ခေါင်းထဲ ထိုးသွင်း ပေးလိုက်ရာ မေသူမှာ ကော့ပြန် လန်နေပါတော့တယ်။ အောင်ကိုနိုင်လည်း စောက်ခေါင်းထဲမှာ အားရအောင်လုပ်ပေးပြီးနောက် လက်ခလယ်ကို စောက်ခေါင်းထဲ ထိုးသွင်းပြီး လျှာကလည်း စောက်စေ့တစ်ခုတည်းကိုသာ ဦးစားပေး ယက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်က မေသူလဲ ဖီးတွေအရမ်းတက်လာပြီး စောက်ပတ်နဲ့အောင်ကိုနိုင့်မျက်နှာကွာသွားမှာစိုးတဲ့အလား အောင်ကိုနိုင့်ခေါင်းကို အတင်းဖိကပ် ထားပါတယ်။ငါးမိနစ်လောက်လုပ်ပေးလိုက်တော့မေသူတစ်ယောက် ကော့တက်လာကာ စေါက်ဖုတ်က အောင်ကိုနိုင် လက်ကိုပွစိပွစိနဲ့ ညှစ်ရင်း ငြိမ်ကျသွားပါတယ်။ အောင်ကိုနိုင်လဲ ပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီး လီးကို မေသူ့လက်ကလေးထဲ ထည့်ပေးလိုက် သည် ..။ “ အကြီးကြီးဘဲ..ကိုရယ် …. ” မေသူက လက်နဲ့ ဆုတ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်နေရင်း ရုတ်တရက် ခေါင်းလေးငုံ့ချပြီး သူ့အကောင်ကြီးကို ငုံကာ စုတ်ပေးပါတော့ သည် ..။ ဒီအခြေအနေအထိ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ သူလုံးဝ ထင်မထားခဲ့ ..။မေသူ သည် မစုတ်တတ် စုတ်တတ် နဲ့ သူ့အတန်ချောင်း ကို စုတ်ပေးနေ သည် ..။
တခါတခါ မေသူ့သွားနဲ့ သူ့အေကောင်ရဲ့ ထိပ်ဖူး ကြီး ခြစ်မိသလိုလို မို့ သူ တွန့်သွား သည် ..။ မေသူက မော့ကြည့်ပြီး ဆက်စုတ်နေပြန် သည် ..။ တချက်တချက် ပြွတ်ကနဲ ပြွတ်ကနဲ အသံများ ထွက်ပေါ်နေ သည် ..။ မေသူ့လျာချွန်ချွန်လေး က သူ့ထိပ်ဖူးကြီးရဲ့ အထစ်ကြားထဲကို ထိုးမွှေကစားနေ သည် ..။ “အို..ဟို…..ရှီး …. မေသူရယ် . ..” မေသူ သည် သူ့အတန်အရင်းအထိ တဆုံးငုံငုံ စုတ်နေသည် ..။ ကောင်းလိုက်တာ..သူ့အမေ ဆီက မရတာ နှစ်ပေါင်းကြာလှပြီ ဖြစ်တဲ့ ပုလွေကို မေသူ သူ့ကို ပီပီပြင်ပြင် ပေးနေ သည် ..။ အစုတ်မခံရတာကြာလို့လားမသိ ..။ မေသူစုတ်ပေးတာနှင့် ပြီးချင်လာသည် ..။
ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင် ထိန်းထားဘို့ မလွယ်တော့တာနဲ့… မေသူ့ပါးစပ်ထဲက လီးတံကို မထုတ်ချင်ပေမယ့် ဆွဲထုတ်ပြီး မေသူ့ကို ပက်လက်လေး အိပ်ခိုင်းလိုက်ရတယ်.ပြီးတော့် အောင်ကိုနိုင် လဲ မေသူထောင်ထားသော ပေါင်နှစ်ချောင်းရှေ့သို့ သူ့ကိုယ်လုံးကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီး သူမ၏ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ကားကာဒူးထောက်၍ဝင်ကာထိုင်လိုက်ပြီး သူမ၏လီးကြီးကို မေသူ၏စောက်ပတ်ဝတွင်တေ့ကာ ဖြေးဖြေးပင်ဖိ၍ သူမ၏စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးကြီးကို ဖိ၍သွင်းလိုက်သည်။ အင့်…..အ…….ဗျစ်…..ဗျစ်….ဟင့်…..အား……အင်း……” မေသူ၏ ခါးလေးကော့တက်လာပြီး သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးမှာ တဆတ်ဆတ် တုန်၍နေသည်။မေသူသည် သူ့အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်ကာမာန်တင်းထားလေသည်။မေသူ၏စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးကြီးတစ်ဝက်နီးပါးမျှဝင်သွားပြီးသောအချိန်တွင် လီးကြီး၏ထိပ်တွင်စောက်ပတ်ထဲမှ အရာတစ်ခုက ခပ်တင်းတင်းလေးကာဆီးထားနေသည်ကို အောင်ကိုနိုင်သည် ခံစားသိရှိလိုက်သည်။
ထိုအခါတွင် အောင်ကိုနိုင်သည် သူ၏လီးကြီးကို မေသူ၏စောက်ပတ်ထဲသို့ဆက်၍ မသွင်းသေးဘဲ သူ၏ခါးကို ညွတ်ကာ မေသူ၏နို့လေးများကို ငုံ့၍ဘယ်ပြန်ညာပြန် စို့ပေးနေလိုက်သည်။ခဏနေတော့မှ စောက်ပတ်ထဲသို့ ဝင်၍သွားသော လီးတန်ကြီးတစ်ဝက်မျှကို ဖြေးဖြေးချင်းဆွဲ၍ထုတ်ကာ ဖြေးဖြေးချင်းပင်ပြန်၍ စောက်ပတ် အတွင်းသို့ ဖိ၍သွင်းလိုက်ပြီး နို့စို့လျှက်ကပင် အောင်ကိုနိုင်သည် လီးတန်ကြီး တစ်ဝက်မျှနှင့်ပင် ဖြေးဖြေးချင်းလိုး၍ ပေးနေတော့၏။ စောက်ပတ်ထဲသို့ တစ်ဝက်မျှပင် လိုး၍ပေးနေသော သူ၏လီးကြီးကို ထိပ်ဖူးကြီးအဖျားနားထိဆွဲ၍ထုတ်လိုက်ပြီး တရှိန်ထိုးပင် သူ၏လီးကြီးကို မေသူ၏စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးတန်ကြီးကို တဆုံးဝင်အောင် ဆောင့်၍ လိုးသွင်းလိုက်ပါတော့သည်။
အ…..အား…….အမလေး…..အ……ကျွတ်…..ကျွတ်…..အမလေး……နာတယ်……ဟင့်….အ…..” “……မေသူ….” “…..အရမ်းနာလို့လားဟင်……” “……အင်း…..ဖြေးဖြေးလုပ်…..” “……အင်း…..ဒါဆို….ကိုယ်ဖြေးဖြေးလိုးပေးမယ်နော်……” မေသူက မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားလျက်က ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။ “……ဖွတ်….ဘွတ်…..ပလွတ်…..” “……ဖွတ်……ဘွတ်…..ပလွတ်…..” မေသူ၏ လက်ကလေးနှစ်ဖက်မှာ နို့စို့ရင်းလိုးပေးနေသော အောင်ကိုနိုင်၏ကျောပြင်သို့ ဖက်တွယ်လာခဲ့ပြီး သူမ၏လက်ဖဝါးလေးဖြင့်ပင် ခပ်ဖြေးဖြေး အောင်ကိုနိုင်၏ကျောပြင်ကိုပွတ်၍နေသေး၏။ အောင်ကိုနိုင်က အားဖြင့်ဖိ၍ ဆောင့်ကာလိုးလာသည်ဆိုလျှင်ပဲ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာ အရသာများ ရှိလာကြပြီဖြစ်သည်။အောင်ကိုနိုင်က မေသူ၏စောက်ပတ်ထဲသို့ ဆောင့်၍လိုးလိုက်တိုင်း သူမ၏ စောက်စေ့လေးကိုပါ ဖိ၍ဖိ၍ ထိသွားရသဖြင့် မေသူမှာ အလိုးခံနေရင်းအရသာများမွန်ထူလာကာ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းလေးများပင် တဆတ်ဆတ်ဖြစ်၍လာရသည်။
မေသူ…..ကောင်းလားဟင်……အင်း…..ကိုရော….ဟင်…..သိပ်ကောင်းတာဘဲ…..မေသူရယ်…..အ….အား….” အောင်ကိုနိုင်သည် အချက်(၄၀)ခန့်ဆောင့်ချလိုးပြီးသည်နှင့် သူ၏လီးကြီးမှာ အီဆိမ့်၍လာပြီးဖြစ်၍ နို့စို့ပေးလျက်ကပင် အားကုန်ထုတ်၍ အချက်(၂၀)မျှဆောင့်ကာလိုးလိုက်ပါတော့၏။အား……အမလေး……ကိုရယ်…….အင်း….ဟင်း… မေသူမှာ အောက်ကနေပြီး ဖင်ကြီးကိုကော့တက်လျက် လက်များက အောင်ကိုနိုင်၏လက်မောင်းများကို ဆုတ်တင်းလိုက်သည်။အကင်းပါးသော အောင်ကိုနိုင်သည် လီးကြီးကိုအဆုံးထိ ထုတ်လိုက်ပြီး ပြန်၍အားကုန်ဆောင့်ပေးနေသည်။ဂွေးဥကြီးမှ မေသူ၏ဖင်သားကြီးများကို တဖတ်ဖတ်ရိုက်သံပင် အခန်းထဲမှာ ပျံ့လွင့်နေပေတော့သည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ထွေးအောင်ဖက်ထားကြပြီး အောင်ကိုနိုင်၏လီးကြီးထိပ်မှ ပြစ်ခဲသော သုတ်ရည်တို့သည် မေသူ၏အပျိုစင်သားအိမ်လေးဆီသို့ တရှိန်ထိုးပန်းသွင်းလိုက်လေတော့သည် ……ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အပြိုစငျမသေူ